ဘက်လိုက်သည့်ဆောင်းပါးများကိုမည်သို့ခွဲခြားသိမည်နည်း။ သူတို့က Prause et al ။ , 2015 ကိုကိုးကားထားသည်။ (မှားယွင်းစွာပြောဆိုခြင်းသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုငြင်းဆန်သည်)၊ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုပံ့ပိုးပေးသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှု ၅၀ ကျော်ကိုချန်လှပ်နေစဉ် - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်တွင်
ဘက်လိုက်ဆောင်းပါးတွေကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ကိုဘယ်လို: သူတို့က Prause et al ကိုးကား, 2015 (မဟုတ်မမှန်က porn စွဲ debunks ဟုဆိုကာ), ညစ်ညမ်းစွဲထောက်ပံ့ 50 အာရုံကြောလေ့လာမှုများကျော်ချန်လှပ်နေစဉ်။
ဆောင်းပါးများနှင့်အင်တာဗျူးများ၏တစ်ဦးကအရေအတွက်အားတွန်း-ကျောဖို့မှာကြိုးစားခဲ့ကြ အချိန် ဆောင်းပါးညစ်ညမ်းသောအရာနှင့်ဆန့်ကျင်သောအန္တရာယ်” ကင်းမျှော်စင်အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက် \_ t) ပြီးနောက် utah resolution ကို အင်တာနက် porn ကိုအများပြည်သူကျန်းမာရေးပြproblemနာကြေငြာ။ ထိုကဲ့သို့သောဆောင်းပါးသည်ဝါဒဖြန့်ချိရေးသာမဟုတ်ကြောင်း“ သေလွန်သောသူတို့သည်ပေးဆပ်ရသောပေးဆပ်မှုအနည်းငယ်” ကဘာလဲ။
စိတ်ပညာရှင် ဒါဝိဒ်သည် Ley နှင့် / သို့မဟုတ် နီကိုးလ် Prause ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများ (Voon, Kraus, Potenza, Brand, Laier, Hajela, Kuhn, Gallinat, Klucken, Seok, Sohn, Gola, Banca, နှင့်ပတ်သက်။ အလွန်လေးစားသောလေ့လာမှုများကိုထုတ်ဝေခဲ့သည့်အမှန်တကယ်ထိပ်စွဲစွဲအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များအဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည် "ကျွမ်းကျင်သူများ") စသည်တို့ကို), ချန်လှပ်ထားပါသည်။ မပါ Ley မဟုတ်သလို Prause မဆိုတက္ကသိုလ်နှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြဖြစ်ကောင်းလွှမ်းမိုးမှု, သေးသောအချို့ဂျာနယ်လစ်များ, Prause ရဲ့အစွမ်းထက်မီဒီယာန်ဆောင်မှုများ, ထူးထူးဆန်းဆန်းယေးလ်တက္ကသိုလ်, ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ်, Duisburg-အက်ဆင်း၏တက္ကသိုလ်, နှင့်မက်စ် Planck အင်စတီကျုမှာထိပ်တန်းအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ကျော်နှစ်ဦးစလုံးကြိုက်တတ်တဲ့။ ကိန်းဂဏန်းသွားပါ။
ဆောင်းပါးသည် Prause ၏အထီးကျန်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ ပုံမှန်မဟုတ် 2015 EEG လေ့လာမှု (Prause et al ။, 2015) တစ်ချိန်တည်းတွင်အခြားအာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှု ၅၁ ခုနှင့်မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောစာပေနှင့်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ၂၅ ခုကိုပယ်ဖျက်ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမရှိကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲအပေါ်ဦးနှောက်လေ့လာမှုများ၏လက်ရှိစာရင်း။ (ဆောင်းပါးအနည်းငယ်သည် Prause ၏ ၂၀၁၃ EEG လေ့လာမှုကိုကိုးကားသည်။ )သံမဏိ et al ။), တကယ်တော့အရာ, မှထောက်ခံမှုချေးငှားသည် အဆိုပါ porn စွဲမော်ဒယ်နှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်).
အဆိုပါဆောင်းပါးများချန်လှပ် 31 မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
ဤဆောင်းပါးများတွင် WHO ၏ ICD-11 နှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိချေ သစ်တစ်ခုရောဂါပါရှိသည် porn စွဲများအတွက်သင့်လျော်သော: "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder။ "
အဆိုပါဆောင်းပါးများချန်လှပ် ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ (နှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများကိုပင်လျှင်) အရှိန်အဟုန်မြှင့်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်မှုများကိုညွှန်ပြသည့်လေ့လာမှု ၅၅ ခုကျော်။
အဆိုပါဆောင်းပါးများအားလုံးချန်လှပ် porn အသုံးပြုသူများအတွက်ရုပ်သိမ်းရေးလက္ခဏာတွေအစီရင်ခံ 14 လေ့လာမှုများ.
အဆိုပါဆောင်းပါးများချန်လှပ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့အောက်ပိုင်း arousal မှ porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက် 40 လေ့လာမှုများကျော် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (အမှ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး7လေ့လာမှုများ causation သရုပ်ပြ, သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေကဲ့သို့) ။
အဆိုပါဆောင်းပါးများချန်လှပ် 80 လျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုမှ porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်လေ့လာမှုများနှင့်ဆင်းရဲတဲ့ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုကျော်.
အဆိုပါဆောင်းပါးများချန်လှပ် ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ပိုမိုညံ့ဖျင်းသောသိမြင်မှုရလဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောလေ့လာမှု ၇၅ ခုကျော်။
အဆိုပါဆောင်းပါးများချန်လှပ် ၃၅ ခုကျော်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းအားအမျိုးသမီးများအပေါ်ထားရှိသည့်“ မညီမျှသောသဘောထားများ” နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်
ဆောင်းပါးများချန်လှပ် မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အပေါ် 280 လေ့လာမှုများ, အရာဝတ္ထုအဖြစ်လူတွေကြည့်ရှု, နိမ့်ဘဝကျေနပ်မှု, ဆင်းရဲတဲ့ကျန်းမာရေး, ပိုပြီးကျူးကျော်, porn အသုံးပြုမှုဆင်းရဲတဲ့ပညာရှင်များပိုမိုလိင်အရအခွင့်အရေးသဘောထားတွေကဲ့သို့သောအချက်များနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းဆင်းရဲတဲ့ဆက်ဆံရေးသတင်းပို့သော, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနည်းကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှု, သာ. ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကိုတိုးမြှင့် unexplained စိုးရိမ်စိတ်, သာ. ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု, နိမ့်လိင်စိတ်, သာ. ကြီးမြတ်အလိုလိုသဘောထားများနှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးအများကြီးပို။
အဆိုပါဆောင်းပါးများမဟုတ်မမှန်ကြောင်း porn စွဲရိုးရှင်းစွာသော်လည်းမြင့်မားလိင်စိတ်ရှိဆိုကြသည် 25 လေ့လာမှုများမှဤမကြာခဏထပ်ခါတလဲလဲ meme မှားယွင်းခဲ့ကြသည်.
ဂန္ထဝင်တွင်astroturfing-စတိုင်"ဆောင်းပါးများအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ ကြော်ငြာ hominem တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ဆန့်ကျင်အမြင်များရှိသူများအပေါ် (ထိုကဲ့သို့သောမရှိသော "ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း - အမိန့်", "နောက်ယောင်" နှင့်ဘာသာရေးနှင့်အမြတ်အစွန်း၏သရေဖျက်မှုတောင်းဆိုမှုများအဖြစ်ထောက်ပံ့, မပါဘဲ ထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုများ၏ရည်ရွယ်ချက်သက်သေ.
အပ်ဒိတ်: ဒီ 2018 တင်ဆက်မှုအတွက်ဂယ်ရီ Wilson ကနှစ်ခုနီကိုးလ် Prause EEG လေ့လာမှုများ (အပါအဝင်5မေးခွန်းထုတ်စရာများနှင့်အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာမှုများ, နောက်ကွယ်မှအမှန်တရားဖျောထုတျသံမဏိ et al။ , 2013 နှင့် Prause et al။ , 2015): porn သုတေသန: အဖြစ်မှန်သို့မဟုတ်ထူးအိမ်သင်?
Prause ၏ ၂၀၁၅ EEG လေ့လာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လက်တွေ့စစ်ဆေးမှု (Prause et al။ , 2015)
Prause ၏ ၂၀၁၅ EEG လေ့လာမှု (ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုငြင်းဆိုခြင်း) သည်သူမ၏အသင်းတွေ့ရှိသောကြောင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုတည်ရှိခြင်းကိုအမှန်တကယ်ထောက်ခံသည် desensitization လေးလံသော porn အသုံးပြုသူများကိုပါ။
ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများကရှိခဲ့ အနိမ့် vanilla ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံများကိုတစက္ကန့်နှင့်ထိတွေ့ရန်ဦးနှောက်ကို Activation ။ ဦးဆောင်ရေးသားသူ, နီကိုးလ် Prause သည်ဤရလဒ်များကို porn စွဲ debunk ဆိုပါတယ်။ သို့သော်ဤတွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူဿုံ align Kühn & Gallinat (၂၀၁၄), ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသော အနိမ့် vanilla porn (နှင့် dorsal striatum အတွက်လျော့နည်းမီးခိုးရောင်ကိစ္စ) ၏ရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်ဦးနှောက်ကို Activation ။ တစ်နည်းမှာမကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည်နေဆဲပုံရိပ်တွေကိုမှ desensitized ခဲ့ကြသည်များနှင့်ရံဖန်ရံခါ porn အသုံးပြုသူများသည်ထက် သာ. ကြီးမြတ်ဆွလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်, စွဲလမ်း၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုသည်းခံစိတ်တွေနဲ့ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ သည်းခံစိတ်ထပ်ခါတလဲလဲသုံးစွဲခြင်း၏ရလဒ်သောမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့လျော့နည်းသွားတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ 10 peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများ t ကိုသဘောတူသူကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ YBOPအထူးသဖြင့် Prause အမှန်တကယ်တွေ့ရှိခဲ့သည့်အရာသည်သူမ၏လေ့လာမှုဘာသာရပ်များတွင်စွဲလမ်းမှု၏သက်ရောက်မှုများနှင့်ကိုက်ညီသည်။
ဒုတိယဝေဖန်မှု, အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်မာတေယူချ် Gola ၏အာဘော်ကြင် up ပြုလုပ်တက်ချုပ်ဖော်ပြ:
"ကံမကောင်းစွာ Prause et al ၏ရဲရင့်ခေါင်းစဉ်။ (၂၀၁၅) ဆောင်းပါးသည်မီဒီယာအပေါ်တွင်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သိပ္ပံနည်းကျတရားမျှတနိဂုံးလူကြိုက်များ။ "
တရားဝင်အဘယ်အရာကိုသုတေသီ အစဉ်အဆက်တစ်ခု debunked ရှိသည်ဟုဆိုကြသည်မယ်လို့ သုတေသနတစ်ခုလုံးကိုလယ်ပြင် နှင့်ကိုချေပရန်အတွက် အားလုံးယခင်လေ့လာမှုများ တစ်ခုတည်း EEG လေ့လာမှုနှင့်အတူ? (ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်နီးစပ်သောဆက်ဆံရေး သုတေသီတစ် ဦး ၏သဘောထားအမြင်ကိုဖုံးကွယ်ထားနိုင်သည်။
Nicole Prause ကသူမရဲ့လေ့လာမှုမှာဘာသာရပ် ၁၂၂ ခုပါရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဖြစ်မှန်တွင်လေ့လာမှုတွင်“ လိင်မှုဆိုင်ရာပုံရိပ်များကိုကြည့်ရှုခြင်းအားပြproblemsနာများကြုံတွေ့နေရသော” ၅၅ ခုသာရှိသည်။ ဘာသာရပ်များကို Mormon ၅၀% ကျော်သော Pocatello Idaho မှစုဆောင်းခဲ့သည်။ ကျန်တဲ့ ၆၇ ယောက်ကတော့ထိန်းချုပ်မှုတွေပါ။
တစ်စက္ကန့်သံသယရှိပြောဆိုချက်ကိုခုနှစ်, Prause et al။ , 2015 ဟာစိတ္တဇနှစ်ဦးစလုံးနှင့်လေ့လာမှု၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ဖော်ပြထား:
ဒါဟာအဖြစ်ရှင်းလင်းစွာကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး ကင်းဘရစ် fMRI လေ့လာမှု တစ်နှစ်နီးပါးအစောပိုင်းကထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
တတိယပြောဆိုချက်ကိုခုနှစ်တွင်နီကိုးလ် Prause တသမတ်တည်းကြောင်းအခိုင်အမာထားပြီး Prause et al ။ , ၂၀၁၅ သည်“ အစဉ်အမြဲပြုလုပ်ခဲ့သောအပြာစွဲစွဲမှု၏အကြီးမားဆုံးအာရုံကြောသိပ္ပံလေ့လာမှု” ဖြစ်သည်။ မှတ်သားသင့်သည်မှာ ဦး နှောက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် EEG လေ့လာမှုများသည်ဘာသာရပ်တစ်ခုစီအတွက်များစွာဈေးချိုသည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်အားစွဲလမ်းမှု (သို့) သီးသန့်ဖယ်ထားသည့်အခြေအနေ (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများ၊ စွဲလမ်းမှု၊ စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုစသည်) အတွက်ဘာသာရပ်များကိုမပြပါက“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူ” များစွာသောအုပ်စုများကိုစုဆောင်းရန်လွယ်ကူသည်။ Prause ၏ပြောဆိုချက်နှင့်အတူပြproblemsနာအချို့ -
ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမရှိလျှင်ညစ်ပတ်စွဲလမ်းမှုကိုလေ့လာခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဒီလေ့လာမှုနှင့်အစောပိုင်းက Prause လေ့လာမှုများ (Prause et al ။, 2013 & သံမဏိ et တစ်ဦးl ။ , 2013), အဘာသာရပ်များမဆို porn စွဲသို့မဟုတ်မဟုတ်ကြခြင်းရှိမရှိအကဲဖြတ်ခဲ့ပါဘူး။ Prause အဆိုပါဘာသာရပ်များအများအပြားနည်းနည်းအခက်အခဲအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ခဲ့ကြောင်းအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်ဝန်ခံ: သူတို့စွဲကြဘူး။ အဆိုပါဘာသာရပ်များအားလုံး Non-porn စွဲ၏အုပ်စုတစုနှင့်အတူတရားဝင်နှိုင်းယှဉ်ခွင့်ရှိခဲ့အတည်ပြုခဲ့သည် porn စွဲရှိသည်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ အပြင် Prause လေ့လာရေးလုပ်ခဲ့တယ် စိတ်ရောဂါ, compulsive အပြုအမူတွေ, သို့မဟုတ်အခြားစှဲများအတွက်ဘာသာရပ်များမျက်နှာပြင်မဟုတ်။ သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ဝေဖန်မှုဆယ်ခုအနက်လေးခုတွင်ဤဆိုးဝါးသောအပြစ်အနာအဆာများကိုထောက်ပြသည် - 2, 3, 4, 8.
"hypersexual disorder နှင့်အတူယောက်ျားအတွက် HPA ဝင်ရိုး dysregulation" (2015) "hypersexuals" (ဒီလိင်ဆက်ဆံမှုကိုကုသရန်ဘာသာရပ် ၆၇ ခုနှင့်အတူ၊ လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့သည့် Prause ၏ ၅၅ ဘာသာရပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) သည်ယနေ့ခေတ်တွင်အာရုံကြောသိပ္ပံကိုအခြေခံသည့်လေ့လာမှုတွင်အများဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီလေ့လာမှုက ဦး နှောက် (ACTH) ကဟော်မုန်းထုတ်လွှတ်မှုနဲ့ ဦး နှောက်ကထိန်းချုပ်တဲ့ဟော်မုန်းကိုအကဲဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုအပေါ် ဦး နှောက်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုအကဲဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဒီလေ့လာမှုကိုလအနည်းငယ်အကြာထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်နေစဉ် Prause et al ။, 2015, နီကိုးလ် Prause အကြီးဆုံးအဖြစ်သူမ၏ EEG လေ့လာမှုတောင်းဆိုနေဆဲဖြစ်သည်။
ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အတူ Functional ဆက်သွယ်မှု Associated: Porn အပေါ်ဦးနှောက် (2014) - ထက်ပိုမိုကြီးမားသောထည့်သွင်းစဉ်းစားရနိုင် Prause et al ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဘာသာရပ်ပေါင်း ၆၄ ခုရှိခဲ့ပြီး၊ ဆေးစွဲခြင်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာသုံးစွဲခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများစတဲ့ဖယ်ထုတ်ခြင်းပစ္စည်းများအတွက်သေချာစွာစစ်ဆေးခဲ့သည်။ Prause လေ့လာမှု (၃) ခုကမလုပ်ခဲ့ပါ။
သင်၏ဘာသာရပ်များသည်စွဲသူများမဟုတ်ပါကသင်သည်“ ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုဖြတ်နိုင်မည်မဟုတ်” ပါ
အဆိုပါ3Prause လေ့လာရေး (Prause et al ။, 2013, Prause et al ။, 2015, သံမဏိ et al ။, 2013 ။) အပေါငျးတို့သပါဝင် တူညီတဲ့ဘာသာရပ်များ။ ဤတွင် Prause ၏လေ့လာမှု (“ Prause Studies”) လေ့လာမှုတွင်“ ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများ” နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့်အရာ - ၎င်းတို့သည်စွဲလမ်းသူများမဟုတ်ကြပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည် porn စွဲလမ်းမှုအတွက်မည်သည့်အခါမျှအကဲဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်စွဲလမ်းမှုပုံစံနှင့်မည်သည့်အရာကိုမဆို“ မှားယွင်း” စေရန်တရားဝင် အသုံးပြု၍ မရပါ။ အုပ်စုတစ်စုအနေဖြင့်၎င်းတို့သည်စွဲလမ်းမှုပုံစံ၏ခန့်မှန်းချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော vanilla porn ကိုအာရုံမစိုက်ဘဲနေလေ့ရှိကြသည်။ ဒီမှာလေ့လာမှုတစ်ခုစီ တကယ်တော့ ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများ
Prause et al ။, 2013vanilla porn အားကြည့်ရှုစဉ်“ စွဲစွဲလမ်းအသုံးပြုသူများ” သည်ငြီးငွေ့မှုနှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုပိုမိုဖော်ပြခဲ့သည်။
သံမဏိ et al ။, 2013: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပိုမိုတုံ့ပြန်နိုင်သည့်လူများ နည်းသော တစ်ဖက်, ဒါပေမယ့်မရ masturbate နည်းအလိုဆန္ဒနှင့်အတူလိင်အဘို့အလိုဆန္ဒ။
Prause et al ။, 2015: "စွဲစွဲသုံးစွဲသူများသည်" ရှိခဲ့ပါတယ် နည်းသော vanilla porn ၏ငြိမ်ပုံရိပ်တွေဖို့ဦးနှောက်ကို Activation ။ အောက်ပိုင်း EEG ဖတ်သည် "porn စွဲ" ဘာသာရပ်များပုံမှလျော့နည်းသတိထားရမှာခဲ့ကြသည်ဟုဆိုလို။
တစ်ဦးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံစံသုံးမျိုးလေ့လာမှုများကနေပေါ်ထွက်လာ: အဆိုပါပိုပြီးမကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများအ desensitized သို့မဟုတ် habituated vanilla porn ငှါ၎င်း, porn ပိုမို cue-reactivity ကိုသူတို့အမှန်တကယ်လူတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံထက် porn မှ masturbate မှပိုမိုနှစ်သက်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ desensitized (စွဲလမ်းတစ်ဘုံအရိပ်အယောင်) နှင့်တစ်ဦးအလွန်အစွမ်းထက်သဘာဝကဆုလာဘ် (ပူးပေါင်းလိင်) ကိုအတုလှုံ့ဆော်မှုပိုမိုနှစ်သက်ခဲ့ကြသည်ရိုးရှင်းစွာထားပါ။ porn စွဲတိမ်အဖြစ်ကဤရလဒ်များကိုအနက်ကိုဘော်ပြစရာလမ်းလည်းမရှိ။
အဘယ်သူမျှမအမှား Make, မ သံမဏိ et al ။, 2013 မဟုတ်သလို Prause et al။ , 2015 သည်ဤ ၅၅ ခုကိုညစ်ညမ်းသောစွဲစွဲသူများသို့မဟုတ်မလိုမုန်းတီးသူများအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များသည်သူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြောင့်စိတ်သောကရောက်ရသည်ဟုသာဝန်ခံခဲ့သည်။ သူမ၏ဘာသာရပ်များ၏ရောနှောသောသဘောသဘာဝကိုအတည်ပြုရန်, Prause ဝန်ခံခဲ့သည် 2013 အင်တာဗျူး အဆိုပါ 55 ဘာသာရပ်များအချို့သူတို့ဆိုလိုတာကသာအသေးစားပြဿနာများ (ကြုံတွေ့ကြောင်း မဟုတ် porn စွဲ):
"ဒီလေ့လာမှုကနေအထိပြproblemsနာများအစီရင်ခံတင်ပြသူတွေကိုသာပါဝင်သည် အတော်လေးအသေးအဖှဲ ပြproblemsနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့၊ အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုသူတို့ရဲ့ကြည့်ရှုခြင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပါ
porn စွဲခဲ့ဘာသာရပ်များ၏အရာထူထောင်မဟုတ်ထို့အပြင် Prause လေ့လာရေးလုပ်ခဲ့တယ် မဟုတ်မျက်နှာပြင်စိတ်ရောဂါများအတွက်ဘာသာရပ်များ, compulsive အပြုအမူတွေ, လက်ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု, သို့မဟုတ်အခြားစှဲ။ ၎င်းသည်စွဲလမ်းမှုအပေါ်မည်သည့်“ ဦး နှောက်လေ့လာမှု” အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်၊
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ,3Prause လေ့လာရေးအဆိုပါဘာသာရပ်များ porn စွဲခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ်မရှိမရှိအကဲဖြတ်ခဲ့ပါဘူး။ စာရေးသူဟာဘာသာရပ်များအများအပြားနည်းနည်းအခက်အခဲအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါဘာသာရပ်များအားလုံး Non-porn စွဲ၏အုပ်စုတစုနှင့်အတူတရားဝင်နှိုင်းယှဉ်ခွင့်ရှိခဲ့အတည်ပြုခဲ့သည် porn စွဲရှိသည်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
2013 ခုနှစ်တွင် Prause နည်းဦးနှောက် Activation လေ့သို့မဟုတ်စွဲလမ်းညွှန်ပြမည်ဟုပြောခဲ့သည်
သငျသညျမှန်ကန်စွာဖတ်ပါ။ Prause ၏ ၂၀၁၅ တွင်“ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” ဟူသောစွပ်စွဲချက်သည်သူမ၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ်လေ့လာမှုတွင်“ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုငြင်းဆန်သည်” ဟူသောပြောဆိုချက်မှခုန်လှန်ဖော်ပြသည်။
သူမ၏အတွက် 2013 EEG လေ့လာမှု နှင့်ဆက်စပ် ဘလော့ဂ်ပို့စ်, Prause ကြောင်းဝန်ခံသည် လျှော့ချ ဦး နှောက်ကိုလုပ်ခြင်းသည်အလေ့အကျင့်သို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုကိုဖော်ပြလိမ့်မည်၊ သို့သော်သူမဘာသာရပ်များသည်တက်ကြွသောလှုပ်ရှားမှုများကိုလျှော့ချမထားကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ ဤပြောဆိုချက်သည်သို့သော်အခြေအမြစ်မရှိခဲ့ပါ ဒီနေရာမှာရှင်းပြခဲ့။ သူမမှာထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့မရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်သူက“ ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများ”” EEG ဖတ်ရှုခြင်းကို“ မစွဲလမ်းသူများ” နှင့်နှိုင်းယှဉ်လို့မရဘူး။ ရလဒ်အနေနှင့်သူမ၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ်လေ့လာမှုကကျန်းမာသန်စွမ်းသူများအတွက်ဖြစ်စေ၊ “ hypersexuals” အတွက် EEG ဖတ်ခြင်းအကြောင်းကိုဘာမှမပြောပါဘူး။
နောက်ဆုံး ၂၀၁၅ တွင်သူသည်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့ပြီးဒုတိယလေ့လာမှုတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သေချာတာပေါ့၊ သူမ၏“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းနေသော” အကြောင်းအရာများသည်ပြသခဲ့သည် လျှော့ချ ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်စေခြင်း - ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများအလေ့အကျင့်သို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုခံစားနေရသောသူများအတွက်မျှော်လင့်ထားသကဲ့သို့ သူမသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၏နိဂုံးချုပ်မှုကိုအားနည်းစေသည့်တွေ့ရှိချက်များကြောင့်သူမရဲရဲရင့်ရင့်သိပ္ပံပညာတွင်အခိုင်အမာမရှိဘဲသူမသည်တွေ့ရှိချက်များကိုတည့်မတ်ပေးသည်ဟုဆိုခဲ့သည် အရာစွဲ၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်ကိုက်ညီခဲ့ကြသည် - "porn စွဲလမ်းဖျက်သိမ်း။ " ဤရွေ့ကား, ဤဝါဒဖြန့်အပိုင်းပိုင်း Prause ရဲ့အခြေအမြစ်မရှိတောင်းဆိုမှုများမှလွဲ။ အခြားအဘယ်သူမျှမထောက်ခံမှုနှင့်အတူပေါ်သို့ချိတ်ဆက်ပြောနေတာအချက်ဖြစ်ပါတယ်။
back up လုပ်ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်လေ့လာမှုမှ Prause ၏အမြင်များကိုပိုမိုလေ့လာကြည့်ကြပါစို့ (သံမဏိ et al။ ):
"ထို့ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမြင့်မားသူများသည်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကြောင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုများအကြားကြီးမားသော P300 လွှဲခွင်ကွာခြားမှုကိုပြသနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမ P300 လွှဲခွင်ကွာခြားချက်ကြောင့် VSS ဖို့လေ့မှတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။"
2013 ခုနှစ်, Prause ထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာညစ်ညမ်းစွဲ, ဖြစ်စေနိုင်ပြပွဲကပြောသည်:
ပိုမိုမြင့်မား ပုံရိပ်တွေမှ cue-reactivity ကိုကြောင့် EEG ဖတ်, ဒါမှမဟုတ်
အနိမ့် porn (VSS) ကိုလေ့ကြောင့် EEG ဖတ်ပါ။
ငါးလ ရှေ့မှာ သူမ၏ 2013 EEG လေ့လာမှုထုတ်ဝေခဲ့ Prause နှင့်ဒါဝိဒ် Ley ဒီရေးသားဖို့တက်ပူးပေါင်း စိတ်ပညာယနေ့တွင် blog post: သူမလာမည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်လေ့လာမှုနှင့် (ယင်း၏ထောက်ခံမှုမရှိသောတောင်းဆိုမှုများ) အကြောင်း။ အထဲတွင်သူတို့ကဝန်ခံလျော့လျှပ်စစ်တုံ့ပြန်မှု"လေ့သို့မဟုတ် desensitization ညွှန်ပြလိမ့်မယ်:
“ ဒါပေမယ့် EEG ဆေးတွေကိုဒီလူတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာလိင်စိတ်စွဲလမ်းမှုလှုံ့ဆော်မှုကိုကြည့်ပြီးရလဒ်တွေကအံ့သြစရာပါပဲ။ လိင်စွဲလမ်းမှုသီအိုရီနဲ့လုံးဝမကိုက်ညီပါဘူး။ အမှန်တကယ် habituating (သို့မဟုတ် desensitizing) ခံခဲ့ရသည်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုပါလျှင်, မူးယစ်ဆေးဝါးကဲ့သို့ထို့နောက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုနေတဲ့ရှိသည်မယ်လို့နေကြတယ် ဦးနှောက်အတွက်လျော့လျှပ်စစ်တုံ့ပြန်မှု။ တကယ်တော့ဒီရလဒ်တွေအတွက်, ထိုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့သည်။ ယင်းအစားပါဝင်သူများ၏ယေဘုယျအားဖြင့်သာမန်လူတို့၏ ဦး နှောက်များကဲ့သို့သောသူတို့၏ပြသထားသောရုပ်ပုံများကိုလျှပ်စစ် ဦး နှောက်တုန့်ပြန်မှုတိုးတက်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ 2013 Prause ဟုပါပြီ "လျော့နည်းသွားလျှပ်စစ်တုံ့ပြန်မှု" လေ့သို့မဟုတ် desensitization ညွှန်ပြလိမ့်မယ်။ သို့သျောနောကျပိုငျးတှငျ Prause နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်ထိန်းချုပ်မှုဆက်ပြောသည်သည့်အခါ 2015 အတွက်နဲ့ desensitization ၏သက်သေအထောက်အထားများတွေ့ရှိရ (စွဲအတွက်ဘုံ), သူမကကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားသည် "လျော့နည်းသွားလျှပ်စစ်တုံ့ပြန်မှု" porn စွဲ debunks ။ ဟမ်?
ဒါကြောင့်တစ်ဦးအမှန်တကယ်ထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူသူမ၏အတူတူပင်ပန်းဘာသာရပ် data တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ Prause ယူ. ကွားနှစ်နှစ်မှာတော့သူမပြည့်စုံလှန်လာသောသေတ္တာကွပ်မျက်ခံရ။ 2015 မှာတော့သူမကထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုကဆက်ပြောသည်သည့်အခါသူမတွေ့ရှိရကြောင်း desensitization ၏သက်သေအထောက်အထားအခိုင်အမာ မဖြစ် စွဲ၏အထောက်အထား (သူမက 2013 ခုနှစ်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူမပြောဆိုထားသည်) ။ အဲဒီအစား, ယခု (မှော်) desensitization ၏သက်သေသာဓက "ကစွဲနှင့်အတူ aligns သော်လည်း" စွဲချက်ကို disproves "။ ၎င်းသည်ကိုက်ညီမှုမရှိဘဲသိပ္ပံပညာနှင့်မကိုက်ညီဘဲတွေ့ရှိချက်များကိုဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိဘဲသူမသည်အမြဲတမ်း“ မှားယွင်းသောစွဲလမ်းမှု” ရှိသည်ဟုဆိုလိမ့်မည်ဟုအကြံပြုထားသည်
အဘယ်အရာကို Porn စွဲ Debunk ဒါကဦးနှောက်လေ့လာရေးအကြောင်း?
အဘယ်သူမျှမရှိတယ်။ မယုံကြည်သောသူတို့ကား, Prause et al။ အသင်းရဲရငျ့စှာဒီကနေယူတစ်ခုတည်းအပိုဒ်နှင့်အတူညစ်ညမ်းစွဲမော်ဒယ်မှားယွင်းစေရန်လုပ်ဆောင်ခြင်းရှိသည်ဟုအခိုင်အမာ 2016 "အယ်ဒီတာမှစာ။ " ဒီကျယ်ပြန့်ဝေဖန်မှုကိုဖျောပွအဖြစ်အဖြစ်မှန်အတွက် Prause အက္ခရာ, ဘာမျှမလိမ်: အယ်ဒီတာ "Prause et al မှပေးစာ။ (2015) စွဲဟောကိန်းများ၏နောက်ဆုံးပေါ်မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု " (2016)။ တိုတောင်းသောများတွင်မရှိလေ့လာမှုများရှိပါတယ် "porn စွဲတွင်မှအမှား။ " ဤစာမျက်နှာကို ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသုံးစွဲသူများ၏လုပ်ဆောင်ပုံကိုအကဲဖြတ်သည့်လေ့လာမှုများအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။ ယနေ့အချိန်အထိလေ့လာမှုတိုင်းသည်စွဲလမ်းမှုပုံစံကိုထောက်ခံမှုပေးသည် (ဆွေးနွေးခဲ့သည့် Prause ၏လေ့လာမှုနှစ်ခုအပါအ ၀ င်) ။ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုငြင်းပယ်သည်ဟုဆိုသည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကလေ့လာမှုတစ်ခုကိုရည်ညွှန်းသည့်အခါတိုင်းသူသည်သူမ၏ EEG လေ့လာမှုနှစ်ခုသို့မဟုတ် Prause, Ley နှင့် Finn တို့၏တာဝန်မဲ့သော“ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း” ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ဤတွင်သူတို့လွယ်ကူစွာကိုးကားဘို့ဖြစ်ကြ၏:
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire မဟုတ်ဘဲ Hypersexuality, (လိင်ပုံများအားဖြင့်ရူးနှမ်း Neurophysiological တုံ့ပြန်ချက်မှ Related ဖြစ်ပါတယ်သံမဏိ et al ။ , 2013)
"Porn စွဲ" နဲ့တသမတ်တည်းရှိမနေသောပြဿနာအသုံးပြုသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်လိင်ပုံများအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းအပြုသဘောဆောင်သောအလားအလာ Module (Prause et al ။ , 2015)
Leကရာဇ်မင်း၌အဝတ်အစားမရှိ - ဒေးဗစ်လလေ၊ နီကိုးလ်ပရပ်နှင့်ပတေရုဖင်တို့၏ 'အပြာစာပေစွဲလမ်းမှု' ပုံစံကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်Ley et al ။ , 2014)
Kinsey Institute မှ grad နီကိုးလ် Prause လေ့လာမှုများ 1 နှင့်2ပေါ်ခဲစာရေးဆရာဖြစ်ပြီး, စက္ကူ #3 အပေါ်ဒုတိယစာရေးဆရာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပြီးသားကြောင်းလေ့လာမှု #2 (Prause အထက်တွင်ကိုမြင်လျှင် et al ။, 2015) ကိုညစ်စွဲမော်ဒယ်မှထောက်ခံမှုချေးငှားသည်။ ဒါပေမယ့် Prause ရဲ့ 2013 EEG လေ့လာမှု (Steele et al ။, 2013), မွှမ်းတင် မီဒီယာ သက်သေအထောက်အထားအဖြစ် ဆန့်ကျင် porn စွဲ၏တည်ရှိမှု, အမှန်တကယ် porn စွဲမော်ဒယ်ကိုထောကျပံ့?
ဒီလေ့လာမှုက သာ သိသာထင်ရှားသောတွေ့ရှိချက်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူနေခဲ့တာ porn ပိုမို cue-reactivity ကို ခဲ့ တစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်များအတွက်လျော့နည်းအလိုဆန္ဒ (porn မှ masturbate မှသော်လည်းမနိမ့်အလိုဆန္ဒ) ။ အခြားသောလမ်း ထား. , porn ပိုဦးနှောက်ကို Activation နှင့်မတရားသောနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီမဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ်လူတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံထက် porn မှ masturbate လိမ့်မယ်။ ဒီအစွဲကိုမကျန်းမာဘာသာရပ်များ၏ပုံမှန်ပါပဲ။
လေ့လာမှုပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်နီကိုးလ် Prause မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည်မျှသာမြင့်သောလိင်စိတ်ခဲ့သေးလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုဆိုပြောဆိုထားသည်။ အဖြစ် Valerie Voon (နှင့် 10 သည်အခြားအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်) ကရှင်းပြခဲ့သည်, Prause ၏ ၂၀၁၃ တွင်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်လိင်မှုဆိုင်ရာပြသနာများနှင့်လိင်မှုကိစ္စအရလိင်ဆက်ဆံလိုသောဆန္ဒများနှင့်အတူလိင်မှုကိစ္စနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် 2014 ဦးနှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးလေ့လာမှု porn စွဲအပေါ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် ၂၀၁၃ ခုနှစ် EEG လေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များသည်ထောက်ခံမှုမရှိသော“ ပြိုကွဲခြင်း” ခေါင်းစီးများနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ သက်တူရွယ်တူ - ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများ 2013 Prause ရဲ့အဖွဲ့ကဒီအစောပိုင်းလေ့လာမှုနှင့်ပတ်သက်။ အမှန်တရားဖော်ထုတ်: ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al ။, 2013။ (ဒါ့အပြင်တွေ့မြင် ဒီကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု။ )
ဘာသာရပ်များညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ကြတဲ့အခါဘက်မှတ်စုအဖြစ်, ဒီတူညီတဲ့ 2013 လေ့လာမှုပိုမိုမြင့်မား EEG ဖတ် (P300) ကဖော်ပြခဲ့သည်။ လေ့လာရေးတသမတ်တည်းစွဲသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်သော (ထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်တွေကဲ့သို့) တွေကိုထိတွေ့သည့်အခါတစ်ဦးမွငျ့မား P300 ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပြသပါ။ အထက်ပါ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများရှင်းပြပြီးစိတ်ပညာပါမောက္ခဂုဏ်ထူးဆောင်အဖြစ်ဤတွေ့ရှိချက်သည်ညစ်ညမ်းစွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါသည် ယောဟနျသအေဂျွန်ဆင်ထောက်ပြ တစ်ဦး 2013 အောက်မှာမှတ်ချက်အတွက် စိတ်ပညာယနေ့တွင် Prause အင်တာဗျူး:
"Prause မှကျွန်ုပ်စိတ်ထဲတွင်မြုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ သူမသည်သူမဘာသာရပ်များ၏ ဦး နှောက်သည်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်သည်သူတို့၏မူးယစ်ဆေးဝါးကိုတုန့်ပြန်သကဲ့သို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များကိုတုန့်ပြန်မှုမပြုခဲ့ဟုသူမကလိင်မှုဆိုင်ရာရုပ်ပုံများအတွက် P300 ဖတ်ခြင်းပိုမိုမြင့်မားကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ P300 spikes များကိုပြသသောဆေးစွဲသူများကဲ့သို့ပင်သူတို့ရွေးချယ်သောဆေးနှင့်ပြသသောအခါ။ သူမည်သို့အမှန်တကယ်ရလဒ်ဆန့်ကျင်ဘက်သောကောက်ချက်ဆွဲနိုင်မည်နည်း"
လိင်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းစွဲမအမြင်ရှိသူဒေါက်တာဂျွန်ဆင်, အဆိုပါ Prause အင်တာဗျူးအောက်မှာတစ်စက္ကန့်အချိန် commented:
သို့သော်လေ့လာမှု non-စှဲလမျးသူထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုကနေမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ဦးနှောက်အသံသွင်းရာမှဦးနှောက်အသံသွင်းအွန်လိုင်း erotica ၎င်းတို့၏ကြည့်ထိန်းညှိပြဿနာများရှိခြင်းပုဂ္ဂိုလ်များထံမှဦးနှောက်အသံသွင်းနှိုင်းယှဉ်မရစိတ်ရှုပ်စရာအုပ်စုမှ ဦး နှောက်တုံ့ပြန်မှုသည်စွဲလမ်းသူများသို့မဟုတ်စွဲလမ်းသူမဟုတ်သူများ၏ ဦး နှောက်တုန့်ပြန်မှုနှင့် ပို၍ တူမလားဆိုတာသိသာထင်ရှားသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများတွင်မထောက်ခံသောပြောဆိုမှုများအပြင် Prause ၏ ၂၀၁၃ EGG လေ့လာမှုသည်နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်များကိုခံစားခဲ့ရသဖြင့်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်မှာစိတ်ပျက်စရာဖြစ်သည်။
ဘာသာရပ်များခဲ့ကြသည် သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော (အထီး, အမြိုးသမီး, Non-လိင်ကွဲ);
မေးခွန်းခဲ့ကြသည် porn စွဲဘို့အတည်ပြုမပေး.
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောတတိယစာတမ်းသည်လုံးဝလေ့လာမှုမဟုတ်ပါ။ ၎င်းအစား၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဘက်မလိုက်သော“ စာပေများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း” အဖြစ်တင်စားသည်။ အဘယ်အရာကိုမျှအမှန်တရားကနေဝေးကွာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဦး ဆောင်စာရေးသူ David Ley သည်စာရေးသူဖြစ်သည် လိင်စွဲလမ်း၏သွန်သင်ချက်အမှား နှင့်နီကိုးလ် Prause ဒုတိယစာရေးဆရာဖြစ်ပါတယ်။ Ley & Prause သည်စက္ကူ (၃) ကိုရေးရန်သာမကအဖွဲ့တစ်ခုကိုလည်းရေးခဲ့သည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် စက္ကူ #1 အကြောင်းကို blog post: ။ အဆိုပါ blog post:5လအတွင်းသည်ထင်ရှား ရှေ့မှာ Prause ၏စက္ကူကိုတရားဝင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Ley ၏ blog post ကို oh-soy catchy ခေါင်းစဉ်ဖြင့်မြင်ဖူးပေလိမ့်မည် -သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်ကိုထိခိုက်စေနိုင်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှစ်ခုလုံးကို Ley ကထက်သန်စွာငြင်းဆိုသည်။ သူသည်ညစ်ညမ်းသောပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖိုရမ်များကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းသော ED မှထုတ်ပယ်ခြင်းများကိုဘလော့ခ်ပို့စ် ၂၀ ကျော်ခန့်ရေးသားခဲ့သည်။ သူသည်သိပ္ပံပညာရှင်မဟုတ်သော်လည်းလက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ Prause ကဲ့သို့မည်သည့်တက္ကသိုလ်နှင့်သုတေသနဌာန၌မျှအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိပါ။ Ley & Prause နှင့်သူတို့၏ပူးပေါင်းမှုများအကြောင်းပိုမိုဖတ်ပါ ဒီမှာ.
အောက်ဖော်ပြပါသည် Ley & Prause ၏“ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း” တွင်ပါ ၀ င်သည့် shenanigans များအားလုံးကိုဖော်ပြသည့်စက္ကူ ၃ ၏ရှည်လျားသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြစ်သည်။ တစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အမျှတစ်ဦးကအရိုးကျိုးရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင် pose: အဆိုပါဧကရာဇ်အဘယ်သူမျှမအဝတ်အစားရှိထားသည်။ ဒါဟာလုံးဝဒါခေါ်ပြန်လည်သုံးသပ် dismantles, သူတို့ကိုးကားသုတေသန၏မှားယွင်းစွာတင်ပြများစွာပါရှိသည်။ အဆိုပါ Ley ပြန်လည်သုံးသပ်၏အများဆုံးတုန်လှုပ်ဖွယ်ရှုထောင့်က porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်တွေ့ရှိခဲ့ porn စွဲနှင့်ဆက်စပ်သောအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုအစီရင်ခံသမျှသောများစွာသောလေ့လာမှုတွေချန်လှပ်ကြောင်းပါ!
ဟုတ်တယ်၊ "ရည်မှန်းချက်" ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ရေးသားရန်ရည်ရွယ်နေစဉ် Ley & Prause သည်ရာနှင့်ချီသောရာနှင့်ချီသောလေ့လာမှုများကိုချန်လှပ်ထားခြင်းသည်ဆက်စပ်မှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများဖြစ်သည်။ ဘာလို့ထင်လဲ? ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောလေ့လာမှုများအားလုံးနီးပါးသည်သူတို့ကိုးကားထားသောသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှုများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြသည်။ သုတေသီများသည်သုံးစွဲသူများအား“ အပျိုစင်အပျိုစင်များ” နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသို့မဟုတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ရန်အတွက်အကြောင်းအရာများကိုညစ်ညမ်းသောအကြောင်းအရာများကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာထားခြင်းဖြင့်အကြောင်းပြချက်ကိုသက်သေပြရန်နည်းလမ်းမရှိသောကြောင့်ဆက်စပ်မှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများကိုသာပြုလုပ်နိုင်သည်။ (ထောင်နှင့်ချီသောယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖြတ်သန်းနေကြသည် ဆန္ဒအလျောက် အမျိုးမျိုးသောဖိုရမ်များအပေါ်သို့သော်နှင့်၎င်းတို့၏ရလဒ်များကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းဖယ်ရှားခြင်းဟာသူတို့ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်သော့ချက် variable ကိုကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ )
တရားဝင်သုတေသီတစ်ယောက်အနေဖြင့်သူတို့၏တစ် ဦး တည်းသောပုံမှန်မဟုတ်သောလေ့လာမှုကထောက်ခံသည့်ယူဆချက်ကိုပြိုကွဲစေခဲ့သည်ဟုဆိုရန်မမျှော်လင့်သောအရာ မျိုးစုံအာရုံကြောလေ့လာမှုများ နှင့် သက်ဆိုင်ရာသုတေသနဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ။ ထို့အပွငျတရားဝင်အဘယ်အရာကိုသုတေသီအဆက်မပြတ်သူတို့ရဲ့တည်းသောစက္ကူ porn စွဲ debunked မူကြောင်းကို tweeting လိမ့်မလဲ? အဘယ်အရာကိုတရားဝင်သုတေသီလို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရလုလင်တို့သည်တိုက်ခိုက်ရန် အဘယ်သူသည်ညစ်ညမ်း-ပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များကို run? အဘယ်အရာကိုတရားဝင်လိင်သုတေသီလို အဆိုပြု 60 (porn အတွက်ကွန်ဒုံး) ဆန့်ကျင် vociferously (နှင့် viciously) မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး? လိင်သုတေသီအဘယျသို့တရားဝင်ရှိသည်မယ်လို့ X-Rated Critics Organisation (XRCO) ၏အနီရောင်ကော်ဇောတွင်သူမ၏ဓာတ်ပုံ (ညာဘက်) မှရိုက်ကူးထားသော porn ကြယ်များနှင့်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်လက်ချင်းတွဲသလား။။ (ဝီကီပီးဒီးယား၏အဆိုအရ အ XRCO ဆုပေးပွဲ အမေရိကန်ကပေးတဲ့နေကြတယ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ နှစ်စဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်သီးသန့် reserved လူတွေအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆုကိုပြသတစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ပါသည်မှ.) Prause ၏ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း.
ဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ? အတော်လေးနည်းနည်းအဖြစ် ဤစာမျက်နှာသည် Prause ၏နှောင့်ယှက်မှုနှင့် cyberstalking နှင့်ပတ်သက်သောရေခဲစိုင်၏အစွန်အဖျားမှတ်တမ်းတင်ထားသည် porn ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, အကြံပြုသူမည်သူမဆို၏။ သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဝန်ခံချက်အသုံးပြုပုံ porn စွဲများ၏ concept ကိုပယ်ချလိုက်သည်။ ဒီမကြာသေးမီကနေဥပမာ, ကိုးကား မာတင် Daubney ဆောင်းပါး လိင် / ညစ်ညမ်းစှဲမှာ about:
ဒေါက်တာနီကိုးလ် Prause, Los Angeles မြို့မှာရှိတဲ့လိင် Psychophysiology နှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအာရုံကြောသိပ္ပံ (Span) ဓာတ်ခွဲခန်းမှာကျောင်းအုပ်ကြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး, သူ့ကိုယ်သူတစ်ဦးကိုခေါ် လိင်စွဲလမ်း၏ "ပရော်ဖက်ရှင်နယ် debunker" ။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, နီကိုးလ် Prause ဟောင်း တွစ်တာဆောင်ပုဒ် သူမသိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနများအတွက်လိုအပ်သောဘက်မလိုက်မှုကင်းမဲ့စေခြင်းငှါအကြံပြု:
“ လူတွေဘာကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေလုပ်ဖို့ရွေးချယ်တာလဲဆိုတာကိုလေ့လာခြင်း စွဲလမ်းမှုအနတ္တမမြွက်ဘဲ
Nicole Prause ၏ twitter ဆောင်ပုဒ်တွင်နောက်ဆုံးသတင်းများ -
UCLA သည် Prause ၏စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခြင်းမရှိပါ။ သူမသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အစောပိုင်းကတည်းကမည်သည့်တက္ကသိုလ်မှအလုပ်မခံခဲ့ရပါ။
အောက်တိုဘာလ, 2015 အတွက် Prause ရဲ့မူလတွစ်တာအကောင့်ကိုအပြီးတိုင်နှောင့်ယှက်ဘို့ဆိုင်းငံ့ထား.
ဆောင်းပါးများစွာက Prause ကို UCLA သုတေသီအဖြစ်ဖော်ပြနေသော်လည်းသူသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်မည်သည့်တက္ကသိုလ်မှအလုပ်မခံခဲ့ရပါ။ နောက်ဆုံးတွင်၊ Prause သည်စီးပွားရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သူမ၏“ ကျွမ်းကျင်သူ” သက်သေခံချက်ကို (အခကြေးငွေပေးရန်) ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ကိုသိရန်အရေးကြီးသည် စွဲနှင့် porn စွဲ။ Prause ကသူမ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရောင်းရန်ကြိုးစားနေပုံရသည်။ သူမသည် EEG လေ့လာမှုနှစ်ခု၏မထောက်ခံနိုင်သောညစ်ညမ်းသောဆေးစွဲမှုမှနိဂုံးမှအကျိုးရရန်ဖြစ်သည်။1, 2), 18 peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများစွဲမော်ဒယ်ကိုထောကျပံ့ပြောပါသော်လည်း!
အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းများက Paid ။ အကျိုးစီးပွားတစ်ဦးဗြောင်ကျကျဘဏ္ဍာရေးပဋိပက္ခများတွင်, ဒါဝိဒ်သည် Ley ဖြစ်ပါသည် porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးက X-ဟမ်းစတားများကလျော်ကြေးငွေခံရ ၎င်းတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုကြော်ငြာရန်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္sာရီဖြစ်သည်ဟုသုံးစွဲသူများကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်။ အထူးသဖြင့် David Ley နှင့်အသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည် လိင်ကျန်းမာရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ (SHA) ရှိ တစ်ဦးက X-ဟမ်းစတားက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူပူးပေါင်း (မြှောင်-Chat ကို) ။ မြင် "Stripchat သင့်ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန် porn-ဗဟိုပြုဦးနှောက်လေဖြတ်ဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမဟာမိတ်တွေနဲ့ aligns":
ထောငျခါစလိင်ကျန်းမာရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ (SHA) အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ ဒါဝိဒ်သည် Ley နှင့်အခြားနှစ်ဦးကိုလည်းပါဝင်သည် RealYourBrainOnPorn.com "ကျွမ်းကျင်သူများက" (Justin Lehmiller & Chris Donahue) ။ RealYBOP သည်အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်သည် ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးလိုလားသူ pornကဦးဆောင်, Self-ဟစျကျွောကွ "ကျွမ်းကျင်သူများက" နီကိုးလ် Prause။ ဤအုပ်စုလက်ရှိတွင်ပါဝင်နေသည် တရားမဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုနှင့်ကီထိုင် တရားဝင် YBOP ဆီသို့ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ရိုးရှင်းစွာထားပါ YBOP နှုတ်ပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေသူတွေကိုလည်းညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းများကပေးဆောင်လျက်ရှိသည် ယင်း၏ / မိမိတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် porn နှင့် cam က်ဘ်ဆိုက်များမျှပြဿနာများ (မှတ်ချက်ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းသုံးစွဲသူများကအာမခံမှ: နီကိုးလ် Prause အဖြစ် porn စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်နီးစပ်သောပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ် နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဒီစာမျက်နှာပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်).
In ဤဆောင်းပါးတွင်, Ley အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းသူ၏နစ်နာကြေးမြှင့်တင်ရေးပယ်ချ:
ခွင့်ပြု, စီးပွားဖြစ် porn ပလက်ဖောင်းနှင့်တိုက်ရိုက် ပူးပေါင်း. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပညာရှင်များအထူးသဖြင့်လုံးဝဘက်မလိုက်အဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတင်ပြချင်ပါတယ်သောသူတို့အဘို့, အခြို့အလားအလာ, အားနည်းချက်တွေရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ "ကျွန်မအပြည့်အဝအပေါင်းတို့အား [Anti-porn ထောက်ခံသူတွေကို] ဆူညံအော်ဟစ်မျှော်လင့် '' အိုးကိုတွေ့မြင်ကြည့်ရှု, ဒါဝိဒ်သည် Ley porn အလုပ်လုပ်သည်," 'Ley ပြောပါတယ်, အဘယ်သူ၏ အမည်အားပုံမှန်အထင်အမြင်သေးနှင့်အတူဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ် NoFap တူသော Anti-တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအသိုင်းအဝိုင်း၌တည်၏။
သို့သော် Stripchat နဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်ခြော Ley အဘို့, ဘက်လိုက်ဒါမှမဟုတ် porn လော်ဘီများ၏အိတ်ကပ်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့သူ့ကိုပယ်ရေးသားဖို့စိတ်အားထက်သန်သူမည်သူမဆိုဖို့စာကျွေးခြင်းပေးသွားမှာပါလျှင်ပင်, ထိုကုန်ချင်းလဲလှယ်ခြင်းကြောင့်ကျိုးနပ်သည်။ "ကျနော်တို့ [စိုးရိမ် porn စားသုံးသူ] ကိုကူညီချင်တယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့သူတို့ကိုသွားပါရန်ရှိသည်" လို့သူကပြောပါတယ်။ "ဤကျွန်တော်တို့အဘယ်သို့ဖြစ်၏။ "
ဘက်လိုက်? Ley ၏ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေး နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားဆေးရွက်ကြီးဆရာဝန်များ, နှင့်လိင်ကျန်းမာရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့သည် ဆေးရွက်ကြီး Institute မှ။
ထို့အပြင်, ဒါဝိဒ်သည် Ley ဖြစ်ပါသည် paid ခံရ porn နှင့်လိင်စွဲ debunk ရန်။ အဆံုးမှာ ဤ စိတ်ပညာယနေ့တွင် ဘလော့ဂ်ပို့စ် Ley ဤသို့ဆို၏
"ထုတ်ဖော်: ဒါဝိဒ်သည် Ley လိင်စွဲလမ်း၏တောင်းဆိုချက်များပါဝင်သောဥပဒေရေးရာကိစ္စများတွင်သက်သေခံချက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ "
2019 ဒါဝိဒ်သည် Ley ရဲ့အသစ်က်ဘ်ဆိုက်၌မိမိကိုကမ်းလှမ်း န်ဆောင်မှု "debunking" ကောင်းမွန်စွာလျော်ကြေးငွေ:
Ph.D ဘွဲ့ကိုဒေးဗစ်ဂျေလီသည်လက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်ဖြစ်ပြီး၊ NM အခြေစိုက် Albuquerque အခြေစိုက်လိင်ကုထုံး၏ AASECT အသိအမှတ်ပြုကြီးကြပ်သူဖြစ်သည်။ သူသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကိစ္စရပ်များတွင်ကျွမ်းကျင်သောသက်သေအထောက်အထားနှင့်မှုခင်းဆိုင်ရာသက်သေခံချက်ကိုပေးခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Ley သည်လိင်စွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စွဲချက်တင်ခြင်းကိုကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်မှတ်ယူပြီးဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်သောသက်သေအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။ သူသည်ပြည်နယ်နှင့်ဖက်ဒရယ်တရားရုံးများတွင်သက်သေထွက်ဆိုခဲ့သည်။
Ley လည်း "လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲ (ငြင်းပယ်နှစ်ခုစာအုပ်တွေရောင်းရာမှအကျိုးမရှိလိင်စွဲလမ်း၏သွန်သင်ချက်အမှား"2012 နှင့်"Dick များအတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ Porn,"2016) ။ (porn ကုမ္ပဏီကြီး MindGeek ကပိုင်ဆိုင်သော) Pornhub porn အကြောင်းကို Ley ရဲ့ 2016 စာအုပ်များအတွက်စာရင်းငါးခုကိုပြန်-ဖုံးထောက်ခံချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်:
မှတ်ချက်: PornHub ခဲ့သည် RealYBOP ရဲ့ကနဦး tweet Retweet မှဒုတိယတွစ်တာအကောင့် PornHub နှင့်အကြားညှိနှိုင်းအားထုတ်မှုအကြံပြုခြင်း၎င်း၏ "ကျွမ်းကျင်သူ" က်ဘ်ဆိုက်ကြေညာ RealYBOP ကျွမ်းကျင်သူများက။ ဝိုး!
နောက်ဆုံးအနေနဲ့, ဒါဝိဒ်သည် Ley မှတဆင့်ပိုက်ဆံစေသည် ကျဲအိုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲအဘယ်မှာရှိသနည်းဟုသူမဆငျမခွလျစ်လျူရှုတော်မူသောနှစ်ခုစာအုပ်တွေထဲမှာထွက်သတ်မှတ်စွဲလမ်း-deniers '' သဘောတရား (အားပေးအားမြှောက် လေ့လာမှုများရာပေါင်းများစွာ နှင့်အသစ်၏အရေးပါမှု compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder ရောဂါ ) ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့အဖြေရှာတဲ့ကို manual ထဲမှာ။ Ley porn သူ၏တဖက်သတ်အမြင်များ featuring ကသူ၏များစွာသောဆွေးနွေးပွဲများများအတွက်လျော်ကြေးငွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ 2019 တင်ဆက်မှုများတွင် Ley ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထောကျပံ့ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်ပေါ်လာသော: အပြုသဘောဆောင်သောလိင်နှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုဖွံ့ဖြိုးဆဲ.
အဆိုပါအထက် Prause နှင့် Ley ရေခဲတောင်၏ရုံအစွန်အဖျားဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်သည်အယောင်ဆောင်သူများ၏အတုအယောင်သိပ္ပံနည်းကျပြောဆိုမှုများကိုသူတို့အနေဖြင့်“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲလမ်းမှုကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပြီ” ဟုအလျင်အမြန်ချေပလိုလျှင် Gabe Deem ၏ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။ porn ဒဏ္ဍာရီ - စွဲလမ်းပြီးတော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နောက်ကွယ်မှာအမှန်တရား။
အောက်ပါဆောင်းပါးများကိုဖော်ပြထားတာဥပမာပြင်ဆင်, မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများကိုးကားနှင့်ရမှတ်ပြောနေတာအများအပြားဘုံ Anti-porn စွဲဝါဒဖြန့်ဖျက်သိမ်းဖို့ယုတ္တိဆင်ခြေအသေးစိတ်:
၏ဝေဖန်မှု: အယ်ဒီတာ "Prause et al မှပေးစာ။ (2015) စွဲဟောကိန်းများ၏နောက်ဆုံးပေါ်မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု"
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn / လိင်စွဲချိတ်ဆက်လေ့လာရေး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှနိမ့်ဦးနှောက်ကို Activation နှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု
ဒေးဗစ်လေဒီ၏ဖိလစ်ဇင်ဘာဘတ်အားတုန့်ပြန်မှုအားဖယ်ထုတ်ခြင်း -“ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမွန်သောသိပ္ပံပညာအပေါ်မှီခိုအားထားသင့်သည်” ဆွေးနွေးပွဲ (မတ်လ၊ ၂၀၁၆)
Jim Pfaus ၏“ သိပ္ပံပညာရှင်တစ် ဦး ကိုယုံကြည်ပါ။ လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္ ”ာရီ” အပေါ် YBOP ၏တုံ့ပြန်မှု (ဇန်နဝါရီ၊ ၂၀၁၆)
ဒါဝိဒ်သည် Ley အဆိုပါ NoFap လှုပ်ရှားမှု (မေလ 2015) တိုက်ခိုက်မှု
Philip Zimbardo & Gary Wilson မှသင်၏လူကြီးများနှင့်порноသည်မည်သို့ရှုပ်ထွေးနေသနည်း (2016)
Porn မှပိုမိုသိရှိရန် - သင်၏ဇွဲကိုဂရုပြုပါ - ဖိလစ်ဇင်ဘာဒိုနှင့်ဂယ်ရီဝီလ်ဆင် (Marty Klein) ၏တုံ့ပြန်မှု (၂၀၁၆)
ဤအပိုင်းသည် YBOP နှင့်အခြားသူများ၏သံသယရှိသောလေ့လာမှုများကိုစုဆောင်းသည် - မေးခွန်းထုတ်စရာ & အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာရေး။ အချို့မှာနည်းစနစ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများပေါ်ပေါက်။ အခြားသူတွေမှာကောက်ချက်မလုံလောက်ထောက်ခံပေါ်လာပါသည်။ အခြားသူတွေများတွင်အသုံးပြုသောခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်ဝေါဟာရများအမှန်တကယ်လေ့လာမှုရလဒ်တွေကိုပေးထားလှည့်စားနေသည်။ တချို့ကကလုံးဝအမှန်တကယ်တွေ့ရှိချက်များရှေ့နောက်မ။
လူအားလုံးတို့သည်အာရုံကြောသိပ္ပံယင်း Porn စွဲမော်ဒယ်ထောက်ပံ့
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောများမှာစာရင်း အားလုံး အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာ (porn စွဲ debunked ရှိသည်ဟုဟုဆိုကာပင်တဦးတည်း) တွေကိုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်လေ့လာမှုများ။ ယနေ့အထိနေ့စဉ်လေ့လာမှု porn စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံမှုပေးထားပါတယ်။ ဤအ 53 လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကို (နှင့်လာမည့်လေ့လာမှုများ) 370 + ဖြင့်တသမတ်တည်းများမှာ အင်တာနက်စွဲ ဦးနှောက် လေ့လာမှုတွေ, အရာအတော်များများလည်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပါဝင်သည်။ ယနေ့အထိနေ့စဉ်လေ့လာမှုကို (porn စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံမှုကမ်းလှမ်းအဘယ်သူမျှမလေ့လာမှုများ porn စွဲမော်ဒယ်တွင်မှအမှား), do 29 အဖြစ် စာပေ၏မကြာသေးမီကမှ neuroscience-based ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း:
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ neuroscience: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို (2015)။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအားဖြိုခွဲရန်ရည်ရွယ်သည့် EEG လေ့လာမှုနှစ်ခုကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။
တစ်ဦးရောဂါအဖြစ်လိင်စွဲ: အကဲဖြတ်ဘို့အထောက်အထား, Diagnosis နှင့်ဝေဖန်သူများမှတုံ့ပြန်မှု (2015), တိကျသောဝေဖန်မှုများအပေါ်ကြာသူတို့ကိုတန်ပြန်ကြောင်းကားအညွှန်းကမ်းလှမ်းတဲ့ဇယားကိုထောက်ပံ့ပေးရာ။
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Neurobiology: လွန်မြောက်သိပ္ပံ (2016) ကောက်နုတ်ချက်: "CSB နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းမှုကိုအကြားအချို့တူညီပေးထား, စှဲများအတွက်ထိရောက်သောဆောင်ရွက်ချက်အရှင်တိုက်ရိုက်ဒီဖြစ်နိုင်ခြေအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အနာဂတ်သုတေသနလမ်းညွန်သို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို CSB ဘို့ဂတိတော်ကိုကိုင်စေခြင်းငှါ။ "
တစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Compulsive သငျ့သလော (2016) ကောက်နုတ်ချက်: "CSB နှင့်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုမမှန်မှုများအကြားထပ်တူလက္ခဏာများရှိသည်။ ဘုံ neurotransmitter စနစ်များသည် CSB နှင့်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ပြီးမကြာသေးမီက neuroimaging လေ့လာမှုများသည်တဏှာနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောတူညီမှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ အလားတူဆေးဝါးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးများကို CSB နှင့်ဆေးစွဲသူများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်နိုင်သည်။
Hypersexuality ၏ Neurobiological အခြေခံ (2016)။ ကောက်နုတ်ချက်: "အတူတူယူအထောက်အထားဖြစ်စဉ်ကိုဆုလာဘ် hypersexuality ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သောတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးမြားတှငျပွောငျးလဲ, amygdala, hippocampus, hypothalamus, septum နှင့်ဦးနှောက်ဒေသများကြောင်းဆိုလိုဟန်ရှိသည်။ မျိုးရိုးဗီဇလေ့လာမှုများနှင့် neuropharmacological ကုသမှုချဉ်းကပ်သည့် dopaminergic စနစ်၏တစ်ဦးပါဝင်ပတ်သက်မှုမှာထောက်ပြတာပါ။"
တစ်အပြုအမူစွဲအဖြစ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: အဆိုပါအင်တာနက်သက်ရောက်မှုနှင့်အခြားကိစ္စများ (2016) ကောက်နှုတ်ချက်: "ဤအပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းငှါအဖြစ်ကိုပိုမိုအလေးပေးအင်တာနက်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်လိုအပ်ပါသည်။"နှင့်"ကူညီခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောတစ်ဦးချင်းစီပြုမူဆက်ဆံသောသူတို့အထဲကနေလက်တွေ့အထောက်အထားစိတ်ရောဂါအသိုင်းအဝိုင်းများက သာ. ကြီးယုံကြည်လက်ခံရပါမည်။ "
ဘာစွဲ (2015) ကောက်နှုတ်ချက်: မကြာသေးမီဆောင်းပါးတွေမှာတော့ဘာစွဲအင်တာနက်စွဲတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အမျိုးအစားစဉ်းစားသည်။ Some လက်ရှိလေ့လာမှုများကျဘာစွဲခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအင်တာနက်ကိုဂိမ်း Disorder ကဲ့သို့သောအခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုအကြားမျဉ်းပြိုင်စုံစမ်းစစ်ဆေး။ Cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာဘာစွဲနေတဲ့အဓိကကျသည့်အခန်းကဏ္ဍမှထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည်။ Neuroimaging လေ့လာမှုများကျဘာစွဲနှင့်အခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းအဖြစ်ဥစ္စာမှီခိုအကြားအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဆင်တူရိုးမှား၏ယူဆချက်ကိုထောကျပံ့။
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စာပေများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ US ရေတပ်ဆရာဝန်များနှင့်ပါ ၀ င်ခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသည်ငယ်ရွယ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများမြင့်တက်လာမှုကိုဖော်ပြသည့်နောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုမှတစ်ဆင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုများကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖော်ထုတ်သောအမျိုးသားများနှင့်ပတ်သက်သောဆေးမှတ်တမ်း ၃ ခုသည်ဆရာဝန်များကတင်ပြသည်။
အွန်လိုင်း porn စွဲ၏ဖြစ်ပျက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး: လွယ်ကူစွာထိခိုက်အချက်များ, ခိုင်ခံ့စေယန္တရားများနှင့်အာရုံကြောယန္တရားများ (2019) တစ်ဦးချင်းစီ - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်: အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း၏ရေရှည်အတွေ့အကြုံကိုတဏှာ၏ကြီးထွားလာသောအသိ, သွေးဆောင်မှုနှင့် functional ဖြစ်စေချွတ်ယွင်း၏ dual-အချက်များအောက်တွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း၏ compulsive အသုံးပြုမှုကိုမှဦးဆောင်သည့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း-related သဲလွန်စမှထိုကဲ့သို့လူမျိုး၏ထိခိုက်မခံတဲ့မှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ ကနေရရှိခဲ့ကျေနပ်မှု၏အဓိပ္ပာယ်ဒါပိုပိုပြီးအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းယခင်စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်စွဲဖြစ်လာဖို့လိုအပ်သည်အားနည်းခြင်းနှင့်အားနည်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်။
သီအိုရီ, ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါ (2019) ၏ကုသမှု - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်: ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပါအဝင် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါအဖြစ် ICD-11 တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ဒီရောဂါများအတွက်အဖြေရှာတဲ့စံ, သို့သော်, စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကြောင့်ပုံမမှန်များအတွက်စံရန်အလွန်ဆင်တူ ... သီအိုရီထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားစွဲလမ်းမမှန်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neurobiological ယန္တရားများညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါအတွက်လည်းတရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ကိုယ်တိုင် - ရိပ်မိပြProbleနာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှု - သုတေသနဒိုမိန်းလိုအပ်ချက်နှင့်ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာရှုထောင့်မှပေါင်းစည်းထားသောပုံစံ (2019) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်: ကိုယ်တိုင် - ရိပ်မိပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအမျိုးမျိုးယူနစ်နှင့်သက်ရှိအမျိုးမျိုးသောစနစ်များနှင့်ဆက်စပ်နေပုံရသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော RDoC ပါရာဒိုင်းအတွင်းတွေ့ရှိချက်များကို အခြေခံ၍ ကွဲပြားခြားနားသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုယူနစ်များအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိသည့်စည်းလုံးမှုပုံစံတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်နိုင်သည် (ပုံ - ၁) ။ SPPPU ရှိသူများအကြားအတွင်းပိုင်းနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာယန္တရားများပြောင်းလဲခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်တွေ့ရသူများနှင့်ဆင်တူသည်။
Cybersex စွဲ - အသစ်ဖြစ်ပေါ်လာသောရောဂါအသစ်တစ်ခု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ကုသမှုခြုံငုံသုံးသပ်ချက် (၂၀၂၀) - ကောက်နုတ်ချက်များybersex စွဲသည်အင်တာနက်မဟုတ်သောအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများပါဝင်သောပစ္စည်းမဟုတ်သောစွဲလမ်းမှုဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်လိင်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာအမျိုးမျိုးကိုအင်တာနက်မီဒီယာများမှအလွယ်တကူရနိုင်သည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင်လိင်မှုကိစ္စကိုပုံမှန်အားဖြင့်တားမြစ်သည်ဟုယူဆကြသော်လည်းလူငယ်အများစုသည်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းခံကြရသည်။ ၎င်းသည်သုံးစွဲသူများအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ဆက်နွယ်မှု၊ ငွေ၊ အဓိကစိတ်ကျဝေဒနာနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါများစသည့်စွဲလမ်းစေနိုင်သည်။
မည်သည့်အခြေအနေများကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောဂါများအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း (ICD-11) တွင်“ စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများကြောင့်အခြားသတ်မှတ်ထားသောရောဂါများ” ဟုသတ်မှတ်သင့်သနည်း။ (၂၀၂၀) - ကောက်နှုတ်ချက်: Self-report၊ အမူအကျင့်၊ electrophysiological နှင့် neuroimaging လေ့လာမှုများမှအချက်အလက်များသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်လောင်းကစား / ဂိမ်းကစားခြင်းဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်အမျိုးမျိုးသောအတိုင်းအတာအထိစုံစမ်းစစ်ဆေး။ တည်ဆောက်ထားသည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များနှင့်နောက်ခံအာရုံကြောဆက်စပ်မှုများပါဝင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ကြိုတင်လေ့လာမှုများတွင်မှတ်သားထားသောအဖြစ်အပျက်များတွင် cue-reactivity နှင့်တလိုတလားရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများပါဝင်သော ဦး နှောက်areasရိယာများ၊ အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုများ၊
လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများစွဲလမ်းစေသောသဘာဝနှင့်ပြသနာရှိသောအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - ကောက်နှုတ်ချက်: ရရှိနိုင်သည့်တွေ့ရှိချက်များအရ CSBD နှင့် POPU ၏လက္ခဏာများသည်စွဲလမ်းမှု၏လက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီပြီးအမူအကျင့်နှင့်ပစ္စည်းစွဲလမ်းမှုများကိုပစ်မှတ်ထားရာတွင်အထောက်အကူပြုသောကြား ၀ င်မှုများသည်လိုက်လျောညီထွေမှုနှင့် CSBD နှင့် POPU နှင့်တစ် ဦး ချင်းကိုထောက်ပံ့ရာတွင်အသုံးပြုရန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ POPU နှင့် CSBD ၏ neurobiology တွင်တည်ရှိပြီးသောဓာတုပစ္စည်းအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများ၊ အလားတူ neuropsychological ယန္တရားများနှင့် dopamine ဆုလာဘ်စနစ်တွင်ဘုံအာရုံကြောနှင့်ဆိုင်သောပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူမျှဝေထားသော neuroanatomical ဆက်စပ်မှုများစွာပါဝင်သည်။
အလုပ်မဖြစ်သောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ - အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ လက်တွေ့အခြေအနေများ၊ neurobiological profile များနှင့်ကုသမှုများ (၂၀၂၀) - ကောက်နှုတ်ချက်: လိင်စွဲလမ်းမှုမှ neurobiologically ကွဲပြားသော်လည်းအကျင့်စွဲစွဲလမ်းမှုပုံစံသည်နေဆဲဖြစ်သည်။ porn စွဲလမ်းမှုကိုရုတ်တရက်ရပ်ဆိုင်းခြင်းသည်စိတ်ဓာတ်၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လိင်နှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ရောဂါနှင့်ဆက်ဆံရေးအခက်အခဲများ ...
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာမမှန်မကန်ပြုခြင်းအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်တွင်မည်သည်များပါဝင်သင့်သနည်း။ (၂၀၂၀) - ကောက်နှုတ်ချက်: CSBD ကိုတွန်းအားပေးထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ …နောက်ထပ်သုတေသနသည် DSM-5 နှင့် ICD-11 ရှိအရာ ၀ တ္ထုမဟုတ်သောသို့မဟုတ်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများအထိလောင်းကစားခြင်းရောဂါနှင့်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ခြင်း၊ အချို့သောသူများအဆိုပြုထားသည့်အတိုင်း ... စိတ်မရှည်သောအရာသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းကိုအကြီးအကျယ်အထောက်အကူမပြုနိုင်ပါ။နှစ်ဦးစလုံး et al ။ , 2019).
လောင်းကစားဆိုင်ရာရောဂါ၊ ပြသနာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အရက်သောက်ခြင်းရောဂါတို့တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း - တူညီမှုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုများ (၂၀၂၁) - ကောက်နှုတ်ချက်: CSBD နှင့်စွဲလမ်းမှုအကြားတူညီမှုကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးဆိုးဝါးသောအကျိုးဆက်များရှိသည့်တိုင်အောင်ထိန်းချုပ်မှု၊ ဆက်လက်သုံးစွဲမှုအားနည်းခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်များတွင်ပါ ၀ င်လိုသောဆန္ဒများကိုမျှဝေခြင်းများဖြစ်နိုင်သည် (37••, 40) ။ ဤရောဂါများရှိသူများသည်မကြာခဏညံ့ဖျင်းသောသိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုနှင့်အားနည်းချက်ရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများကိုပြသကြသည်။12, 15,16,17] ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သည့်သင်ကြားမှုဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်များသည်ရောဂါများစွာတွင်တွေ့ရသည်။
မြင် မေးခွန်းထုတ်စရာ & အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာရေး သူတို့ဖြစ်ဖို့တောင်းဆိုဘယ်အရာကိုမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုမြင့်မားထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာတမ်းများသည်။
မြင် ဒီစာမျက်နှာ လိင်မှုဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်လိင်မှုကိစ္စပြpornနာများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုလျော့နည်းသွားစေသည့်လေ့လာမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်
“ ဦး နှောက်လေ့လာမှု” (fMRI, MRI, EEG, Neuro-endocrine)
ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အတူ Functional ဆက်သွယ်မှု Associated: Porn အပေါ်ဦးနှောက် (2014) - မက်စ်ပန့်ခ်ျအင်စတီကျူ့ဒီ fMRI လေ့လာမှုကဆုလာဘ်စနစ် (dorsal striatum) တွင်ညစ်ညမ်းသောပမာဏနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင်လိင်မှုဆိုင်ရာဓါတ်ပုံများကိုခေတ္တကြည့်ရှုစဉ်ညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဆုလာဘ်တိုက်နယ်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုလည်းတွေ့ရှိရသည်။ သုတေသီများကသူတို့၏ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များသည်တူညီသောမြင့်မားမှုရရှိရန်ပိုမိုနှိုးဆွမှုအတွက်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သော desensitization နှင့်သည်းခံစိတ်ရှိခြင်းကိုပြသခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ လေ့လာမှုတွင်လည်းညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းများသည်ဆုလာဘ် circuit နှင့် prefrontal cortex အကြားဆင်းရဲသောဆက်သွယ်မှုများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုလည်းဖော်ပြခဲ့သည်။
နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2014) မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏အာရုံကြောဆက်စပ် ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှလေ့လာမှုတစ်ခုအရမူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်အရက်သေစာသောက်သုံးသူများ၏ ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုပုံစံကိုတွေ့ရသည်။ ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများသည်လက်ခံထားသောစွဲလမ်းမှုပုံစံနှင့်ပိုမိုကိုက်ညီကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရှိရသည် မဟုတ် ပိုပြီး "က" ကြိုက်တယ်။ သုတေသီများကလည်း (၆၀%) ဘာသာရပ်များ (ပျမ်းမျှအသက် - ၂၅ နှစ်) သည်မိတ်ဖက်များနှင့်စိုက်ထူခြင်း / နှိုးဆွမှုရရှိရန်အခက်အခဲရှိသော်လည်း၊
နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2014) မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်အကဲဆတ်တွေကိုဦးတည် Enhanced အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု - ဒုတိယ Cambridge တက္ကသိုလ်၏လေ့လာမှု။ ကောက်နှုတ်ချက် -ကျွန်ုပ်တို့၏တိုးမြှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၏ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက် ... စွဲ၏ရောဂါများအတွက်မူးယစ်ဆေးတွေကိုများ၏လေ့လာမှုများမှာလေ့လာတွေ့ရှိတိုးမြှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့်အတူဖြစ်နိုင်သမျှထပ်အကြံပြုအပ်ပါသည်. ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်မူးယစ်ဆေး-cue-reactivity ကိုလေ့လာမှုများအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရကြောင်းအလားတူကွန်ယက်အတွက် [porn စွဲ] တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမှအာရုံကြော reactivity ကို၏မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူဆုံနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုရန်ထစ်အငေါ့တုံ့ပြန်မှုအခြေခံစွဲ၏မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုသီအိုရီအဘို့အထောကျပံ့ပေး [ porn စွဲ] ။"
အသစ်အဆန်း, အခြေအနေများနှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်များ (2015) မှ - နောက်ထပ် Cambridge တက္ကသိုလ် fMRI လေ့လာမှု။ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူများသည်လိင်ဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအခြေအနေများကိုဖော်ပြသည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာလေ့ကျင့်သည်။ အသစ်အဆန်းကို ဦး စားပေးကြိုတင်မတည်ရှိသေးသောကြောင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်အလေ့အကျင့်များနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုကိုကျော်လွှားရန်ကြိုးပမ်းမှုအသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေသည်။
ပြဿနာ Hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire ၏အာရုံကြောအလွှာ (2015) - ဤကိုရီးယား fMRI လေ့လာမှုသည် porn အသုံးပြုသူများနှင့် ပတ်သက်၍ အခြား ဦး နှောက်လေ့လာမှုများကိုပုံတူပွားသည်။ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်လေ့လာမှုများအရမူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏ပုံစံများကိုထင်ဟပ်စေသောလိင်စွဲသူများအတွက် cue- သွေးဆောင်ခြင်းဖြင့် ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းပုံစံကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဂျာမန်လေ့လာမှုအတော်များများအရမူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏အပြောင်းအလဲနှင့်လိုက်ဖက်သော prefrontal cortex ပြောင်းလဲမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အသစ်သောအရာမှာတွေ့ရှိချက်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲသူများတွင်တွေ့ရသော prefrontal cortex activation ပုံစံများနှင့်ကိုက်ညီခြင်းဖြစ်သည်။ လိင်ပုံရိပ်များကို cue-reactivity ပိုမိုကောင်းမွန်စေသော်လည်းအခြားပုံမှန်လှုံ့ဆော်မှုများကိုတုံ့ပြန်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire မဟုတ်ဘဲ Hypersexuality, လိင်ပုံများ (2013) ကရူးနှမ်း Neurophysiological တုံ့ပြန်ချက်မှ Related ဖြစ်ပါတယ် - ဤ EEG လေ့လာမှုကိုကြေငြာခဲ့သည် မီဒီယာ porn / လိင်စွဲလမ်း၏တည်ရှိမှုဆန့်ကျင်သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်။ မရဒါ. သံမဏိ et al။ 2013 အမှန်တကယ်ဆင်း-ထိန်းညှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ porn စွဲများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုနှစ်ဦးစလုံး၏တည်ရှိမှုဖို့ထောက်ခံမှုချေးငှားသည်။ ဘယ်လိုနည်းဖြင့်? အဆိုပါလေ့လာမှုကိုပိုမိုမြင့်မား EEG ဖတ်အစီရင်ခံတင်ပြ (ကြားနေဓါတ်ပုံတွေကိုမှဆွေမျိုး) ဘာသာရပ်များခေတ္တညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံနှင့်ထိတွေ့သောအခါ။ လေ့လာရေးတသမတ်တည်းစွဲသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်သော (ထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်တွေကဲ့သို့) တွေကိုထိတွေ့သည့်အခါတစ်ဦးမွငျ့မား P300 ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပြသပါ။ ယင်းနှင့်အတူအညီ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကဦးနှောက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးလေ့လာမှုများ, ဒီ EEG လေ့လာမှု လည်း ပူးပေါင်းလိင်များအတွက်လျော့နည်းအလိုဆန္ဒနှင့်အတူ correlating porn ပိုမို cue-reactivity ကိုအစီရင်ခံထားသည်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန် - porn ပိုမိုဦးနှောက်ကို Activation နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီမဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ်လူတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံထက် porn မှ masturbate လိမ့်မယ်။ ချောက်ခြားစရာကောင်းလောက်အောင်, လေ့လာမှုပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် နီကိုးလ် Prause "မြင့်မားတဲ့လိင်စိတ်" porn အသုံးပြုသူများသည်မျှသာရှိခဲ့ကြောင်းအခိုင်အမာမရှိသေးပါလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုပြောပါ အတိအကျဆန့်ကျင်ဘက် (ပူးပေါင်းလိင်များအတွက်ဘာသာရပ်များ '' အလိုဆန္ဒဟာသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းကျဆင်းနေခဲ့သည်) ။ အတူတူအဲဒီနှစျခု သံမဏိ et al ။ တွေ့ရှိချက်များအရ (ရုပ်ပုံများကို) ကြည့်ခြင်းအတွက် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုပိုမိုများပြားသော်လည်းသဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများကို (လူနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း) ကိုတုန့်ပြန်မှုနည်းသည်။ ဒါကစွဲလမ်းမှု၏အမာခံများဖြစ်သော sensitization & desensitization ။ သက်တူရွယ်တူ - ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများရှစ်အမှန်တရားရှင်းပြ: ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al ။, 2013။ ဒီကိုလည်းတွေ့မြင် ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု။
ပြImagesနာရှိသောသုံးစွဲသူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များအားဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အလားအလာများ“ Porn စွဲ” နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသောထိန်းချုပ်မှုများ (၂၀၁၅) - ၂၀၁၃ ဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်သောနောက်ထပ် SPAN Lab EEG (ဦး နှောက်လှိုင်း) လေ့လာမှု အထက်ပါလေ့လာမှု အမှန်တကယ်ထိန်းချုပ်သည့်အဖွဲ့တစ်ခုသို့ (သို့သော်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအတာများအားနည်းချက်များကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်) ။ ရလဒ်မှာ“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပြproblemsနာများကြုံတွေ့ရသောသူများ” ကိုထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည် အနိမ့် vanilla porn ဓာတ်ပုံများကိုတစ်စက္ကန့်ထိတွေ့ခြင်းကို ဦး နှောက်ကတုံ့ပြန်သည်။ ဦး ဆောင်ရေးသားသူနီကိုးလ်ပရာ့စ်ကဤရလဒ်များသည်“ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှု” ကိုဖော်ပြသည်။ အဘယ်အရာကိုတရားဝင်သိပ္ပံပညာရှင်သူတို့ရဲ့တစ် ဦး တည်း Anomalous လေ့လာမှုတစ်ခု debunked သိရသည်ဆိုကြသည်လိမ့်မယ် လေ့လာမှုတစ်ခုလုံးကိုလယ်ပြင်? ၏အဖြစ်မှန်မှာတော့တွေ့ရှိချက် Prause et al ။ 2015 နှင့်အတူဿုံ align Kühn & Gallinat (2014), vanilla ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်သောအားဖြင့်ပိုမိုအသုံးပြုခြင်းသည် ဦး နှောက်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ Prause ၏တွေ့ရှိချက်များသည်လည်းဆက်စပ်နေသည် BANCA et al ။ 2015 သောဤစာရင်းထဲတွင် #4 ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, အခြား EEG လေ့လာမှု အမြိုးသမီးမြားတှငျပိုမို porn အသုံးပြုမှုကို porn မှ ဦး နှောက် activation နှင့်ဆက်နွယ်သောတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ EEG နိမ့်ဖတ်ခြင်းကဘာသာရပ်များသည်ရုပ်ပုံများကိုအာရုံစိုက်မှုနည်းသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည် vanilla porn ၏ငြိမ်သက်သောပုံရိပ်များကိုအထင်မသေးပါ။ သူတို့က (လေ့သို့မဟုတ် desensitized) ပျင်းခဲ့ကြသည်။ ဒီကိုကြည့်ပါ ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု. ရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်သောစာတမ်း ၁၀ ခုကဤလေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများကို (စွဲလမ်းမှုနှင့်ကိုက်ညီမှု) တွင်အရှိန်မြှင့် / အလေ့အကျင့်တွေ့ရှိကြောင်းသဘောတူသည် Peer-ပြန်လည်သုံးသပ် Prause et al ၏ဝေဖန်မှု။ , 2015
hypersexual ရောဂါ (2015) နဲ့အမျိုးသားများတွင် HPA ဝင်ရိုး dysregulation - အမျိုးသားလိင်စွဲလမ်းသူ (၆၇) ဦး နှင့်အသက်အရွယ်အလိုက်ထိန်းချုပ်မှု (၃၉) ခုပါ ၀ င်သည့်လေ့လာမှုတစ်ခု။ Hypothalamus-Pituitary-Adrenal (HPA) ဝင်ရိုးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတွင်အဓိကကစားသမားဖြစ်သည်။ စွဲ ဦးနှောက်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်ပြောင်းလဲ အလုပ်မဖြစ်တဲ့ HPA ဝင်ရိုးမှဦးဆောင်။ လိင်စွဲ (hypersexuals) ပေါ်မှာဤလေ့လာမှုမူးယစ်ဆေးစွဲ mirror ကြောင်းပြောင်းလဲစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Hypersexual Disorder ၏ Pathophysiology အတွက် Neuroinflammation ၏အခန်းက္ပ (2016) - ဤလေ့လာမှုကကျန်းမာသန်စွမ်းသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်စွဲသူများတွင် Tumor Necrosis Factor (TNF) ပျံ့နှံ့နှုန်းမြင့်မားကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲသည့်တိရိစ္ဆာန်များ (အရက်၊ ဘိန်းဖြူ၊ မက်) တွင် TNF (ရောင်ရမ်းခြင်းအမှတ်အသား) မြင့်မားသောအဆင့်များကိုတွေ့ရှိရသည်။ hypersexuality ကိုတိုင်းတာသည့် TNF အဆင့်နှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အကြားပြင်းထန်သောဆက်နွယ်မှုများရှိသည်။
Hypersexual Disorder (2017) နှင့်အတူအမျိုးသားများအတွက် HPA ဝင်ရိုးတန်း Related Gene ၏ methylation - ဒါကနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပါတယ် အထက် #8 အရာလိင်စွဲအလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များရှိသည်တွေ့ရှိခဲ့ - စွဲကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အဓိက neuro-endocrine ပြောင်းလဲမှု။ လက်ရှိလေ့လာမှုလူ့စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုမှဗဟိုမျိုးဗီဇအပေါ်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့ရှိရနှင့်အနီးကပ်စွဲနှင့်ဆက်နွယ်။ ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူ ယင်း DNA ကို sequence ကိုပြောင်းလဲမဟုတ်ပါဘူး (က mutation နှင့်အတူဖြစ်ပျက်ကဲ့သို့) ။ အဲဒီအစား, မျိုးဗီဇ tagged ဖြစ်ပါတယ်နှင့်၎င်း၏စကားရပ်ကိုတက်လှည့်သို့မဟုတ်ဆင်း (ဖြစ်ပါတယ်ဗွီဒီယိုအတိုပီဂနြရှင်းပြ) ။ ဒီလေ့လာမှုမှာအစီရင်ခံအဆိုပါဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုပြောင်းလဲမှုများကိုပြောင်းလဲ CRF ဗီဇလှုပ်ရှားမှုခဲ့သည်။ CRF တစ်ဦး neurotransmitter နှင့်ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ် ကြောင်းစွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုမောင်း ထိုကဲ့သို့သောမတရားသောနှင့်နေသည်အဖြစ် အဓိကကစားသမား နှင့် ဆက်စပ်. ကြုံတွေ့ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေအတော်များများအတွက် ပစ္စည်းဥစ္စာ နှင့် အမူအကျင့်စှဲအပါအဝင် porn စွဲ.
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: Prefrontal နှင့် limbic အသံအတိုးအကျယ်နှင့် interaction က (2016) - ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက CSB ဘာသာရပ်များ (ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများ) သည်ဘယ်ဘက် amygdala ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် amygdala နှင့် dorsolateral prefrontal cortex DLPFC အကြားအလုပ်လုပ်ဆက်သွယ်မှုကိုလျှော့ချခဲ့သည်။ အဆိုပါ amygdala နှင့် prefrontal cortex အကြားအလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုလျှော့ချပစ္စည်းဥစ္စာစွဲနှင့် aligns ။ ပိုမိုထိရောက်သောဆက်သွယ်မှုသည်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူတွင်အသုံးပြုရန်အသုံးပြုသူ၏လှုံ့ဆော်မှုအပေါ် prefrontal cortex ၏ထိန်းချုပ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်ဟုယူဆရသည် ဒီလေ့လာမှုကမူးယစ်ဆေးဝါးအဆိပ်သင့်မှုဟာမီးခိုးရောင်ရောဂါဖြစ်စေနိုင်ပြီးမူးယစ်ဆေးစွဲသူများအတွက် amygdala ပမာဏကိုလျှော့ချနိုင်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။ အမိဂဒလသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း၊ အထူးသဖြင့်လိင်ဆိုင်ရာကန ဦး ထိတွေ့မှုတွင်စဉ်ဆက်မပြတ်တက်ကြွစွာပါဝင်သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်စဉ်ဆက်မပြတ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသစ်အဆန်းရှာဖွေခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများအတွက်အထူးတလည်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ တနည်းအားဖြင့်နှစ်ပေါင်းများစွာလိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆိုးရွားသည့်ဆိုးကျိုးများမှာအလွန်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်သည်hronic လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည် တိုးမြှင့် amygdala အသံအတိုးအကျယ်။ လေ့လာမှု #8 အထက် "လိင်စွဲသူများ" တွင်အလွန်အကျွံဖိစီးမှုစနစ်ရှိသည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။ porn / လိင်စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု, လိင်ထူးခြားသောစေအချက်များနှင့်အတူ သာ. ကြီးမြတ် amygdala အသံအတိုးအကျယ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်မလား?
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကိုစှဲဖြစ်နိုင်သလား? ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာအမျိုးသားများအတွက်တစ်ခု fMRI လေ့လာမှု (2017) - ကောက်နှုတ်ချက်: (PPU) နှင့်ပြဿနာ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲယောက်ျားခေါ်ဆောင်သွားဓါတ်ပုံတွေကိုခန့်မှန်းတွေကိုမှဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုအတွက်, ဒါပေမယ့်မနှင့်အတူတသမတ်တည်းခေါ်ဆောင်သွားဓာတ်ပုံများကိုမိမိတို့ကိုယ်မှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ကွဲပြား စှဲ၏မက်လုံးပေး salience သီအိုရီ။ ဤသည်ကဦးနှောက်ကို Activation (ပိုမိုမြင့်မား '' လို ') ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုရန်တိုးမြှင့်အပြုအမူလှုံ့ဆျောမှုဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။ ခေါ်ဆောင်သွားဓါတ်ပုံတွေကိုခန့်မှန်းတွေကိုအဘို့အ Ventral striatal reactivity ကို, ရက်သတ္တပတ်များနှင့်အပတ်စဉ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအရေအတွက်နှုန်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပမာဏ PPU ၏ပြင်းထန်မှုမှသိသိသာသာဆက်စပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များကဲ့သို့ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုခြင်းနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းမမှန်အတွက်တွေကို anticipatory အပြောင်းအလဲနဲ့ဆက်စပ်သည့်အာရုံကြောနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာယန္တရားများ PPU ၏ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာ features တွေလုပ်ဖို့အရေးကြီးဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် PPU တစ်ဦးအမူအကျင့်စွဲကိုယ်စားပြု PPU နှင့်အတူယောက်ျားကူညီပေးနေအတွက်လိုက်လျောညီထွေနှင့်အသုံးပြုခြင်းတို့အတွက်အမူအကျင့်များနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းမှုကိုရမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပစ်မှတ်ထားအတွက်ကြားဝင်အထောက်အကူဖြစ်စေအကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ပြောင်းလဲအစာစားချင်စိတ်အခြေအနေများနှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်သွယ်မှု (2016) - အဓိကတွေ့ရှိချက်နှစ်ခုကိုပုံတူပြုလုပ်သည့်ဂျာမန် fMRI လေ့လာမှု Voon et al ။ , 2014 နှင့် Kuhn & Gallinat 2014။ အဓိကတွေ့ရှိချက်များ - CSB အုပ်စုတွင်အစာစားချင်စိတ်အခြေအနေနှင့်အာရုံကြောဆက်သွယ်မှု၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သုတေသီများအဆိုအရပထမပြောင်းလဲမှု - ပိုမိုမြင့်မားသောအမဂဒလာကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုသည် - အေးဆေးတည်ငြိမ်သောအေးစက်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည်။ ဒုတိယအပြောင်းအလဲ - ventral striatum နှင့် prefrontal cortex အကြားဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားခြင်း - Impulses သတင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်စွမ်းရည်ချို့တဲ့ခြင်းအတွက်အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သုတေသီများက“ဤရွေ့ကား [ပွောငျးလဲ] အခြားလေ့လာမှုများနှင့်အတူလိုင်း၌ရှိကြ၏ စွဲလမ်းပုံမမှန်ခြင်းနှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့များ၏အာရုံကြောဆက်စပ်စုံစမ်းစစ်ဆေး ထိန်းချုပ်မှုလိုငွေပြမှု။ " တွေကိုပိုမို amygdalar activation ၏တွေ့ရှိချက်များ (ာင်း) နှင့်အကျိုးကိုစင်တာနှင့် prefrontal cortex (အကြားဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားhypofrontality) ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲတွင်တွေ့မြင်အဓိက ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ထို့အပြင် compulsive porn သုံးစွဲသူ ၂၀ အနက် ၃ ခုသည်“ အော်ဂဇင် - စိုက်ထူသောရောဂါ” ခံစားခဲ့ရသည်။
အဆိုပါရောဂါဗေဒမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အလွဲသုံးစားမှုနှင့် Non-မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ် (2016) ကိုဖြတ်ပြီး compulsive - ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှအရက်၊ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၊ ဗွီဒီယိုဂိမ်းစွဲသူများနှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများ (သို့) ညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများအတွက်မဖြစ်မနေလိုက်နာရမည့်အချက်များကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာသည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ CSB ဘာသာရပ်များဝယ်ယူအဆင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့် perseverate ဒါမှမဟုတ်ဆုကြေးအခြေအနေဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အနိုင်ရရှိဖြစ်စေပြီးနောက်နေဖို့ကပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်အတွက်ဆုလာဘ်ထံမှသင်ယူရန်ပိုမိုမြန်ဆန်ခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ခြုံငုံဆုလာဘ်မှတိုးမြှင့် sensitivity ကိုအကြံပြုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ငွေကြေးဆိုင်ရာဖြစ်စေရလဒ်များမှအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်မြှင့်တင်ရန် preference ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်တွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူဆုံ (BANCA et al ။ , 2016) ။
ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းဖြစ်နိုင်သလား? ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (2017) အတွက်ကုသမှုရှာကြံယောက်ျားတစ်ဦး fMRI လေ့လာမှု - ကောက်နှုတ်ချက်: ပြဿနာ porn SUE (PPU) နှင့်မပါဘဲအမျိုးသားများခေါ်ဆောင်သွားဓါတ်ပုံတွေကိုခန့်မှန်းတွေကိုမှဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုအတွက်, ဒါပေမယ့်မနှင့်အတူတသမတ်တည်းခေါ်ဆောင်သွားဓာတ်ပုံများကိုမိမိတို့ကိုယ်မှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ကွဲပြား စှဲ၏မက်လုံးပေး salience သီအိုရီ။ ဤသည်ကဦးနှောက်ကို Activation (ပိုမိုမြင့်မား '' လို ') ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုရန်တိုးမြှင့်အပြုအမူလှုံ့ဆျောမှုဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။ ခေါ်ဆောင်သွားဓါတ်ပုံတွေကိုခန့်မှန်းတွေကိုအဘို့အ Ventral striatal reactivity ကို, ရက်သတ္တပတ်များနှင့်အပတ်စဉ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအရေအတွက်နှုန်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပမာဏ PPU ၏ပြင်းထန်မှုမှသိသိသာသာဆက်စပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များကဲ့သို့ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုခြင်းနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းမမှန်အတွက်တွေကို anticipatory အပြောင်းအလဲနဲ့ဆက်စပ်သည့်အာရုံကြောနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာယန္တရားများ PPU ၏ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာ features တွေလုပ်ဖို့အရေးကြီးဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် PPU တစ်ဦးအမူအကျင့်စွဲကိုယ်စားပြု PPU နှင့်အတူယောက်ျားကူညီပေးနေအတွက်လိုက်လျောညီထွေနှင့်အသုံးပြုခြင်းတို့အတွက်အမူအကျင့်များနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းမှုကိုရမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပစ်မှတ်ထားအတွက်ကြားဝင်အထောက်အကူဖြစ်စေအကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
Emotion မသိနှင့် Non-သတိဆောင်ရွက်ချက်များ: သူတို့ဟာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူပြောင်းသလား? (2017) - erotica အပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသောစိတ်ခံစားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောရုပ်ပုံများအပေါ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူ၏တုံ့ပြန်မှု (EEG ဖတ်ခြင်းနှင့်စတင်ခြင်းတုံ့ပြန်မှု) သည်လေ့လာမှုကိုအကဲဖြတ်သည်။ လေ့လာမှုအနိမ့်အနိမ့်အပြာ porn အသုံးပြုသူများနှင့်ကြိမ်နှုန်းမြင့် porn အသုံးပြုသူများအကြားအများအပြားအာရုံကြောကွဲပြားမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကောက်နှုတ်ချက် - တွေ့ရှိချက်များကိုတိုးမြှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ Self-အစီရင်ခံစာအားဖြင့်မပြသခဲ့သည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု-inducing လှုံ့ဆော်မှုဖို့ဦးနှောက်ရဲ့ Non-သတိတုံ့ပြန်မှုတခုတခုအပေါ်မှာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ဖို့ပေါ်လာအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2009) ၏ထကြွလွယ်သောနှင့် neuroanatomical ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု - အဓိကအားဖြင့်လိင်စွဲသူများ။ လေ့လာမှုတွင်လိင်အကျင့်စွဲသူများ (hypersexuals) များ၌ထိန်းချုပ်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Go-NoGo တွင်ပိုမိုစိတ်ရှုပ်ထွေးသောအပြုအမူများကိုဖော်ပြသည်။ ဦး နှောက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုအရလိင်စွဲသူများသည်ပိုမိုများပြားသောစနစ်မကျသည့် prefrontal cortex အဖြူရောင်ပြmatterနာများရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက် hypofrontality, စွဲ၏အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကိုက်ညီသည်။
Neurophysiological တွက်ချက်ချဉ်းကပ် (2018) အပေါ်အခြေခံပြီးညစ်ညမ်းစွဲထောက်လှမ်းခြင်း - porn စွဲနှင့် Non-စွဲအကြားအတော်ကြာအာရုံကြောကွဲပြားခြားနားမှုသတင်းပို့တစ်ခု EEG လေ့လာမှု။ ထူးခြားတဲ့ကြောင်းအတွက်ဘာသာရပ်များပျမ်းမျှအသက် 14 ဖြစ်ခဲ့သည်။
မီးခိုးရောင်ကိစ္စလိုငွေပြမှုနှင့်ပြဿနာ hypersexual အပြုအမူ (2018) နဲ့တဦးချင်းစီတို့တွင်သာလွန်ယာယီ gyrus အတွက်ပြောင်းလဲငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ်ဆက်သွယ်မှု - fMRI လေ့လာမှု။ အနှစ်ချုပ်: ... လေ့လာမှု PHB (လိင်စွဲ) နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအကြားယာယီ gyrus အတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စလိုငွေပြမှုနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုပြောင်းလဲပြသခဲ့သည်။ ပို။ အရေးကြီးသည်မှာလျော့နည်းသွားဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့က connectivity အဆိုး PHB ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် PHB ၏နောက်ခံအာရုံကြောယန္တရားများသို့သစ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေး.
ပြောင်းလဲ Prefrontal နှင့်ပြဿနာ Hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် Stroop Task ကိုစဉ်အတွင်းယုတ်ညံ့ Parietal လုပ်ဆောင်ချက် (Seok & Sohn, 2018) - [ဆင်းရဲသောအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှု - PFC ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုချို့ယွင်းစေသည်။ ကောက်နှုတ်ချက် - ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက် PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ PHB များအတွက်အာရုံကြောအခြေခံများကိုအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်လက်ျာ DLPFC အတွက်ချို့ယွင်း functionality နဲ့ယုတ်ညံ့ parietal cortex လျော့ပြီအကြံပြုအပ်ပါသည်။
oxytocin အချက်ပြအပေါ် putative ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူ hypersexual ရောဂါအတွက် microRNA-4456 ၏ Hypermethylation-ဆက်စပ် downregulation: miRNA မျိုးဗီဇ၏ DNA methylation ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (2019) - hypersexuality (porn / လိင်စွဲ) နဲ့ဘာသာရပ်များအပေါ်လေ့လာမှုအရက်သမားအတွက်ဖြစ်ပေါ်သူတို့အား mirroring ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအပြောင်းအလဲများကတင်ပြထားပါတယ်။ အဆိုပါဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအပြောင်းအလဲများကို (စသည်တို့ကိုမတ်ေတာ, Bond, စွဲလမ်း, စိတ်ဖိစီးမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်အရေးကြီးသောအရာ) ကို oxytocin စနစ်ဖြင့်ဆက်စပ်ဗီဇထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မှုနှင့်စွဲလမ်းမှုရောဂါများအတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်ခြားနားချက်များ (Draps et al ။, 2020) - ကောက်နှုတ်ချက်: ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကထိခိုက်ခံရသူများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ (CSBD)၊ လောင်းကစားခြင်းနှင့်အရက်သုံးစွဲမှုရောဂါ (AUD)၊ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသေးငယ်သော GMVs ကိုပြသသည်။ အထူးသဖြင့် orbitofrontal cortex တွင်ဖြစ်သည်။ ညာဘက် anterior cingulate gyrus ရှိ GMV …ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များသည်တိကျသော Impulse Control Disorders နှင့်စွဲလမ်းမှုအကြားတူညီမှုကိုဖော်ပြသည်။
ပုံမှန် Testosterone ဟော်မုန်းနှင့်မြင့်မားသော Luteinizing Hormone Plasma Levels (ယောက်ျားများတွင် Hypersexual Disorder) (2020) - ကောက်နှုတ်ချက်: အဆိုပြုထားသောယန္တရားများတွင် HPA နှင့် HPG အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၊ ဆုလာဘ်အာရုံကြောကွန်ယက်သို့မဟုတ် prefrontal cortex ဒေသများအားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများထိန်းချုပ်မှုကိုတားဆီးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။32 နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက hypersexual အမျိုးသားများတွင် LH ပလာစမာအဆင့်မြင့်လာခြင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်တင်ပြခဲ့သည်။ ဤပဏာမတွေ့ရှိချက်များက neuroendocrine systems နှင့် HD တွင် dysregulation ပါဝင်ပတ်သက်မှုဆိုင်ရာစာပေများကိုကြီးထွားစေသည်။
Hypersexual Disorder (အမျိုးသားများရှိ Plasma Oxytocin Levels) (၂၀၂၀) - ကောက်နှုတ်ချက်: ရလဒ်အနေဖြင့် hypersexual disorder နှင့်အတူအမျိုးသားလူနာများအတွက် hyperactive oxytonergic system ကိုအကြံပြုသည်။ အောင်မြင်သော CBT အုပ်စုကုထုံးသည် hyperactive oxytonergic system အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
တားဆီးထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ပြproblemနာရှိသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်း - အင်ဆူလာ၏အရေးပါသောဟန်ချက်ညီမှုအခန်းကဏ္ ((၂၀၂၀) - ကောက်နှုတ်ချက်: သည်းခံစိတ်နှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးကြားမှုရှုထောင့်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် interoceptive နှင့် reflective system ၏ differential activity နှင့်ဆက်စပ်သောမြင့်မားသောလက္ခဏာပြင်းထန်မှုရှိသူများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော inhibitory control စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရှင်းပြနိုင်သည်။ IP အသုံးပြုမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုလျော့နည်းလာခြင်းဟာထကြွလွယ်သော၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့် interoceptive စနစ်များအကြားအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပါ ၀ င်သောအမျိုးသားများအတွက်အလုပ်လုပ်သောမှတ်ဥာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဦး နှောက်ပြုပြင်ခြင်းကိုပြောင်းလဲစေသည်။ ကောက်နှုတ်ချက်: ဤတွေ့ရှိချက်များသည်စွဲလမ်းမှုစွဲလမ်းစေသည့်သီအိုရီနှင့်အညီဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုအပေါ် မူတည်၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပြုပြင်စဉ်ကာလအတွင်းအဓိကအားဖြင့်အချက်အချာကျသည့်အရာအဖြစ်အင်ဆူလာနှင့်အဓိကအားထားသည့်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုကွန်ယက်နှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောလုပ်ဆောင်မှုဆက်သွယ်မှုနှင့်ကိုက်ညီသည်။
အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏ပုဂ္ဂလဒိreward္ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုလူ့အသိုက်နှင့် Orbitofrontal cortex (၂၀၂၀) တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ - ကောက်နုတ်ချက်များ VSS ကြည့်နေစဉ်အတွင်း NAcc နှင့် caudate လှုပ်ရှားမှုအား VSS ကြည့်ရှုစဉ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့ရသော်လည်းအကြောင်းအရာသည်ပိုမိုပြaticနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုဖော်ပြသည့်အခါဤအသင်း၏အားသာချက်မှာပိုမိုများပြားသည်။ အဆိုပါရလဒ် NAcc အတွက်မက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုတုံ့ပြန်မှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားပိုမိုနှစ်သက်လှုံ့ဆော်မှု, ပိုမိုဘာသာရပ်အတွေ့အကြုံများ PPU အကြားပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ခွဲခြားသောအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးအာရုံကြောသိပ္ပံ - ကာကွယ်တားဆီးရေးကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အမျိုးသမီးများအတွက် prefrontal cortex နှင့် ၀ က်သားစားသုံးမှုကို fNIRS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ - ကောက်နှုတ်ချက်: ရလဒ်များအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း (vs. control clip) သည်ညာဘက်ခြမ်းရှိ Brodmann ၏45ရိယာ ၄၅ ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေသည်။ Self- အစီရင်ခံစားသုံးမှုအဆင့်နှင့်မှန်ကန်သော BA 45 ကိုအသက်သွင်းခြင်းအကြားအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုလည်းပေါ်လာသည်။ Self- အစီရင်ခံစားသုံးမှုပမာဏများလေလေ၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုတစ်ခါမှမသုံးစွဲခဲ့ကြသောပါဝင်သူများသည် control clip နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း (BA 45) ၏မှန်ကန်သောလုပ်ဆောင်မှုကိုပြသကြသည် (စားသုံးသူမဟုတ်သူများနှင့်စားသုံးသူများအကြားအရည်အသွေးကွာခြားချက်ကိုပြသည်။ ဤရလဒ်သည်လယ်ကွင်းရှိအခြားသုတေသနများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ စွဲလမ်း၏။
ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှု (၂၀၂၀) တွင်အမျိုးသားများအကြားအမူအကျင့်ဆိုင်ရာတားစီးထိန်းချုပ်မှုအားနည်းသော ၂ ခုရွေးချယ်သည့် oddball လုပ်ငန်းတာဝန်ရှိသည့်အဖြစ်အပျက်များ - ကောက်နှုတ်ချက်: သီအိုရီအရကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များအရ cybersex စွဲသည် electrophysiological နှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအဆင့်များတွင် Impulsivity ၏စည်းကမ်းချက်များအရပစ္စည်းအသုံးပြုမှုရောဂါနှင့် Impulse Control ရောဂါနှင့်ဆင်တူကြောင်းဖော်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များသည်ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှုသည်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါအသစ်တစ်ခုအဖြစ်ဖြစ်နိုင်ချေနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားဖွယ်ရာအဖြစ်ဆိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
အဖြူရောင်အရာဝတ္ထုနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ - Diffusion Tensor Imaging study (2020) - ကောက်နှုတ်ချက်: ၎င်းသည်မလိင်အင်္ဂါအပြုအမူဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါနှင့်ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများရှိလူနာများအကြားခြားနားချက်များကိုအကဲဖြတ်သည့်ပထမဆုံး DTI လေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် CSBD ဘာသာရပ်များရှိ ဦး နှောက်၏ဒေသ ၆ ခုတွင်အက်ဖ်အေ၏လျှော့ချမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ DTI အချက်အလက်များအရ CSBD ၏အာရုံကြောဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုများသည်ယခင်ကစာပေတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်ဒေသများနှင့်စွဲခြင်းနှင့် OCD တို့နှင့်ထပ်တူကျနေကြောင်းပြသသည်။
အထက်ပါလေ့လာမှုများများမှာ အားလုံး အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများအပေါ် (သို့မဟုတ်သတင်းစာတွင်) ထုတ်ဝေသော“ ဦး နှောက်လေ့လာမှုများ” ။
ခေတ္တမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုသည့်အခါကပိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလျော့နည်းဆုလာဘ် circuit ကို activation ဆက်နွယ်နေကြောင်း။
ပိုများသော porn အသုံးပြုမှုအကျိုးကိုတိုက်နယ်နဲ့ prefrontal cortex အကြားနှောင့်အယှက်အာရုံကြောဆက်သွယ်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်း။
အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်ဖြစ်ပေါ်ရသောပြောင်းလဲဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်ထင်ဟပ်ထားတဲ့အလုပ်မဖြစ် HPA ဝင်ရိုး, (နှင့်နာတာရှည်လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆက်နွယ်သော သာ. ကြီးမြတ် amygdala အသံအတိုးအကျယ်,) ။
ထို့အပြင်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းအတွက်ဖြစ်ပေါ်ရသော - ကင်ဆာ Necrosis Factor (TNF) ၏အဆင့်မြင့်။
(ကောက်နှုတ်ချက်နှင့်အတူ) Porn အသုံးပြုသူများအပေါ် Neuro-စိတ်ဓာတ်လေ့လာရေး:
ယောက်ျားတစ်ဦးလူနာနှင့်ရပ်ရွာနမူနာများတွင်အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုနှင့် hypersexual အပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် self-အစီရင်ခံကွဲပြားခြားနားမှု (2010) - hypersexual လိင်အပြုအမူအတွက်အကူအညီတောင်းသောလူနာများသည်မကြာခဏစိတ်မ ၀ င်စားမှု၊ သိမြင်မှုတင်းကျပ်မှု၊ တရားစီရင်မှုအားနည်းခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများချို့တဲ့ခြင်းနှင့်လိင်နှင့်အလွန်အကျွံအလုပ်ရှုပ်ခြင်းစသည်တို့ကိုမကြာခဏပြလေ့ရှိသည်။ ဤအဝိသေသလက္ခဏာများအချို့လည်းအလုပ်အမှုဆောင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်အာရုံကြောရောဂါဗေဒနှင့်အတူတင်ပြလူနာအကြားဘုံဖြစ်ကြသည်။ ဤလေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရလက်ရှိ hypersexual လူနာအုပ်စု (n = 87) နှင့် hypersexual မတူသောလူထုနမူနာများ (n = 92) အကြားကွဲပြားခြားနားမှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအနေဖြင့်အလုပ်အမှုဆောင် - အရွယ်ရောက်ဗားရှင်း Hypersexual အပြုအမူ၏အပြုအမူအဆင့်သတ်မှတ်ချက် Inventory ကို အသုံးပြု၍ အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလုပ်အမှုဆောင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုညွှန်းကိန်းများနှင့် BRIEF-A ၏အများအပြား subscales နှင့်အတူ။ ဤတွေ့ရှိချက်များသည်အလုပ်အမှုဆောင်ကမောက်ကမဖြစ်မှု hypersexual အပြုအမူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်သည်ဟူသောယူဆချက်ကိုထောက်ခံသည့်ပဏာမသက်သေအထောက်အထားဖြစ်သည်။
အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအကဲခတ်: အင်တာနက်ကိုလိင်ဆိုဒ်များအလွန်အကျွံ (2011) အသုံးပြုခြင်းများအတွက်လိင်စိတ်နိုးထ Ratings အဖွဲ့နှင့်စိတ်ဓာတ်-စိတ်ရောဂါရောဂါလက္ခဏာများ၏အခန်းက္ပ - ရလဒ်များအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဆက်စပ်နေ့စဉ်အသက်တာ၌ Self-အစီရင်ခံပြဿနာများသည်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထ ratings, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြင်းထန်မှုများကခန့်မှန်းခြင်း, နေ့စဉ်အသက်တာ၌အင်တာနက်ကိုလိင်က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ဖြစ်ခြင်းလာသောအခါလိင် applications များ၏နံပါတ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်ကြောင်းညွှန်ပြ အင်တာနက်ကိုလိင်က်ဘ်ဆိုက်များ (တစ်နေ့လျှင်မိနစ်) ရက်နေ့တွင်သုံးစွဲအချိန်ကိုသိသိသာသာ IATsex ရမှတ်အတွက်ကှဲလှဲ၏ရှင်းပြချက်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမပြုခဲ့နေစဉ်။ ကျနော်တို့သိမြင်မှုနှင့်ဦးနှောက်ယန္တရားအကြားအချို့မျဉ်းပြိုင်အလားအလာဟာအလွန်အကျွံကျဘာများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အဖော်ပြထားသူတို့အားပံ့ပိုးတွေ့မြင်
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအပြောင်းအလဲနဲ့အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည် (2013) နဲ့နှောင့်ယှက် - တချို့ကတစ်ဦးချင်းစီထိုကဲ့သို့သောအိပ်ပျော်ခြင်းပျောက်ဆုံးနှင့်အပျက်သဘောဘဝအကျိုးဆက်များနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောချိန်း, မေ့လျော့အဖြစ်, အင်တာနက်လိင်ဆက်ဆံမှုစဉ်နှင့်အပြီးပြဿနာများသတင်းပို့ပါ။ အလားအလာပြဿနာများကိုဤမျိုးစုံမှဦးဆောင်တစ်ခုမှာယန္တရားအင်တာနက်ကိုလိင်စဉ်အတွင်းလိင်စိတ်နိုးထသက်ဆိုင်ရာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ထို့ကြောင့်မဲ့ဖြစ်စေသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့လျစ်လျူရှုမှုအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ် (WM) စွမ်းရည်နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်စေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ ရလဒ်များသုံးယောက်ကျန်ရှိရုပ်ပုံအခြေအနေများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆိုပါ 4-ကျောတာဝန်များ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအခြေအနေပိုမိုဆိုးရွား WM စွမ်းဆောင်ရည်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ စွဲ-related တွေကိုအားဖြင့် WM ်ရောက်စွက်ဖက်ကောင်းစွာဥစ္စာမှီခိုရာမှလူသိများသည်ဖြစ်သောကြောင့်တွေ့ရှိချက်အင်တာနက်စွဲမှလေးစားမှုနှင့်အတူဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက်-Making သဲသဲကွဲကွဲမရှိသောလက်အောက်တွင်နှင့်အတူလိင်ရုပ်ပုံထုတ်ယူခြင်း်ရောက်စွက်ဖက် (2013) - လိင်ပုံများအကျိုးရှိကုန်းပတ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည့်အခါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများကိုစွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းယှဉ်မဲ့ဖြစ်စေသည်ကဒ်ကုန်းပတ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည့်အခါဆုံးဖြတ်ချက်ချစွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုဆိုးရွားခဲ့သည်။ ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထတာဝန်အခြေအနေနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချစွမ်းဆောင်ရည်အကြားဆက်ဆံရေးတည်းဖြတ်။ ဒီလေ့လာမှုကလိင်စိတ်နိုးထအချို့သောတစ်ဦးချင်းစီကျဘာအသုံးပြုမှုများ၏အခြေအနေတွင်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကိုတွေ့ကြုံခံစားရှင်းပြရသောဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်အတူဝငျရောကျစှကျကအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
ဘာစွဲ: အတွေ့အကြုံလိင်စိတ်နိုးထညစ်ညမ်းနှင့်မစစ်မှန်သောဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်စောင့်ကြည့်သည့်အခါခြားနားချက် (2013) စေသည် - ရလဒ်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းတွေကိုမှလိင်စိတ်နိုးထနှင့်တဏှာ၏အညွှန်းကိန်းကိုပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုမှာကျဘာစွဲဆီသို့ဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုခန့်မှန်းဖော်ပြသည်။ ထို့အပွငျကပြဿနာဘာအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်း cue တင်ဆက်မှုကနေရရှိလာတဲ့ သာ. ကြီးမြတ်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်တဏှာတုံ့ပြန်မှုသတင်းပို့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုတွေမှာနံပါတ်နှင့်စစ်မှန်သောဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်တွေနဲ့အရည်အသွေးကျဘာစွဲမှဆက်စပ်မခံခဲ့ရပါ။ ရလဒ်ယန္တရားများသင်ယူခြင်း, အားဖြည့်ယူဆသောဆန္ဒပြည့်အယူအဆ, ကိုထောကျပံ့များနှင့်ကျဘာစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်စွဲလမ်း။ ညံ့ဖျင်းသောသို့မဟုတ်ချည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစစ်အမှန်ဘဝအဆက်အသွယ်လုံလုံလောက်လောက်ကျဘာစွဲရှင်းပြလို့မရပါဘူး။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏လိင်ကွဲအမျိုးသမီးသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ဘာစွဲဆန္ဒပြည့်အယူအဆ (2014) ကရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ် - ရလဒ်များသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုပိုပြီး arousal အဖြစ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ rated ကြောင်းညွှန်ပြခြင်းနှင့် Non-အသုံးပြုသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်မှုကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတင်ဆက်မှုပိုမိုတဏှာကဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုမှတပါး, တဏှာ, ညစ်ညမ်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ဘာစွဲဆီသို့သဘောထားတွေကိုဟောကိန်းထုတ်ပုံများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ sensitivity ကို, ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှု၏လိင်စိတ်နိုးထ rating ။ တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်တွေနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုများနှင့်အပြန်အလှန်ကျဘာအသုံးပြုမှုအရေအတွက်ကျဘာစွဲနှင့်ဆက်စပ်မခံခဲ့ရပါ။
တစ်ဦးသိမှုအပြုအမူကြည့်ရန် မှစ. ကျဘာစွဲမှပံ့ပိုးအချက်များအပေါ်ပင်ကိုယ်မူလအထောက်အထားများနှင့်သီအိုရီကိုစဉ်းစား (2014) - ယခင်အလုပ်အပြုသဘောအားကောင်းနှင့် cue-reactivity ကို, CA ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အဓိကယန္တရားဖြစ်စဉ်းစားနေစဉ်အချို့သောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း,, CA မှအားနည်းချက်ဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုထားသည်။ ဤလေ့လာမှု၌, 155 လိင်ကွဲအထီး 100 ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ rated နှင့်လိင်စိတ်နိုးထသူတို့ရဲ့တိုးညွှန်ပြ။ ထို့အပွငျ, CA, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ sensitivity ကိုများနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်၏အလုပ်မဖြစ်အသုံးပြုမှုကိုဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အဲဒီမှာ, CA မှအားနည်းချက်၏အကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြောင်းနှင့် CA. ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနဲ့အလုပ်မဖြစ်ဖြေရှင်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုအဘို့သက်သေသာဓကများကိုလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုပြသ
Prefrontal ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်း: neuropsychological နှင့် neuroimaging တွေ့ရှိချက်တစ်ခုသီအိုရီမော်ဒယ်နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ် (2015) - ဤတသမတ်တည်း, အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging နှင့်အခြား neuropsychological လေ့လာမှုများကနေရလဒ်တွေကိုကြောင်း cue-reactivity ကို, တဏှာနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအင်တာနက်စွဲကိုနားလည်ဘို့အရေးကြီးသောသဘောတရားတွေဟာဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်လျှော့ချအပေါ်တွေ့ရှိချက်ထိုကဲ့သို့သောရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းကဲ့သို့သောအခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။ တွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူတော်တော်များများတူညီပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုလည်းရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအစတစ်ခုစွဲအဖြစ်ဖြစ်ရပ်ဆန်းများခွဲခြားအလေးပေး။ ထို့အပြင်လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုသုတေသနကနေတွေ့ရှိချက်မှနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ကြပြီးကျဘာစွဲခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုသို့မဟုတ်အခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုအကြား analog တွေကိုအလေးပေး။
ဘာစွဲအတွက်သွယ်ဝိုက်အသင်းအဖွဲ့များ: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အတူတစ်သွယ်ဝိုက်အစည်းအရုံးစမ်းသပ်ခြင်း၏ adapter ။ (2015) - မကြာမီကလေ့လာမှုများကျဘာစွဲခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုအကြားတူညီပြသပြီးအမူအကျင့်စွဲအဖြစ်ကျဘာစွဲခွဲခြားဖို့ငြင်းခုန်။ ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုခုနှစ်, သွယ်ဝိုက်အသင်းအဖွဲ့များအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှလူသိများကြသည်။ ရလဒ်များကျဘာစွဲ, ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အဖြစ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာဆီသို့ဦးတည် sensitivity ကိုဦးတည်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့သဘောထားတွေကိုနှင့်အတူညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ၏သွယ်ဝိုက်အသင်းအဖွဲ့များအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်ဆံရေးကိုပြသပါ။
ပုံမှန်ဘာအသုံးပြုသူများသည် (2015) ၏့ Analog နမူနာကနေရလဒ်တွေကို: ဘာစွဲ၏ရောဂါလက္ခဏာများနှစ်ဦးစလုံးချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ရှောင်ရှားညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ် - ရလဒ်များကျဘာစွဲဆီသို့သဘောထားတွေနဲ့အတူလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းချဉ်းကပ်ပုံသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုကိုရှောင်ကြဉ်ဖြစ်စေရန်တော်မှာကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်တည်းဖြတ်ဆုတ်ယုတ်မြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားနှင့်မြင့်မားသောချဉ်းကပ်မှု / ရှောင်ရှားလိုတဲ့သဘောထားကိုပြသသူကိုပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ, ကျဘာစွဲမြင့်မားရောဂါလက္ခဏာတွေကဖော်ပြခဲ့သည်ကြောင်းထင်ရှားလေ့လာဆန်းစစ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုဖို့ analog, ရလဒ်များကိုနှစ်ဦးစလုံးချဉ်းကပ်မှုနှင့်ရှောင်ရှားလိုတဲ့သဘောထားကိုကျဘာစွဲနေတဲ့အခန်းကဏ္ဍစခွေငျးငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ညစ်ညမ်းအတူ flyer တဲ့? တစ်ဦး multitasking ကိုအခြေအနေမှာဘာတွေကိုသုံးရင်သို့မဟုတ်လစ်လျူရှုကျဘာစွဲ (2015) ၏ရောဂါလက္ခဏာမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည် - စွဲလမ်း၏စိတ်ခွန်အားနိုးမော်ဒယ်များထဲမှာဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်းကျဘာစွဲဆီသို့ဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီသည်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းရှောင်ရှားရန်သို့မဟုတ်ချဉ်းကပ်ဖို့အကွံဖြစ်စေရှိသည်ဖို့ပုံရသည်။ (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al နေဖြင့်အကြံပြုအဖြစ်။ , 2014) ပြဿနာကျဘာကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဘို့အအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှု functions များ, ပု prefrontal cortex ကကမကထပြုခဲ့ဆိုလိုသည်မှာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတစ်အခန်းကဏ္ဍဆီသို့ဦးတည်လက်ရှိလေ့လာမှုအချက်၏ရလဒ်များကို။ အထူးသဖြင့်စားသုံးမှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့နဲ့တစ်ဦးရည်မှန်းချက်လုံလောက်သောထုံးစံ၌ညစ်ညမ်းပစ္စည်းနှင့်အခြားအကြောင်းအရာများကိုအကြားအကူးအပြောင်းတစ်ခုလျှော့ချနိုင်စွမ်းကိုကျဘာစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်တဦးတည်းယန္တရားဖြစ်နိုင်သည်။
(2015) ဝညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်နှောင့်နှေး: လက်ရှိပျော်ရွှင်မှုအဘို့အနောက်ပိုင်းတွင်ဆုလာဘ်များအရောင်းအဝယ်ဖြစ် - လေ့လာမှု ၁ - သင်တန်းသားများသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းမေးခွန်းလွှာနှင့်အချိန် ၁ တွင်နောက်ဆုတ်ခြင်းလျှော့ချခြင်းလုပ်ငန်းပြီးဆုံးပြီးနောက်လေးပတ်အကြာတွင်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောကန ဦး ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံသောသင်တန်းသားများသည် Time 1 တွင်ပိုမိုနှေးကွေးသောလျှော့နှုန်းကိုပြသခဲ့သည်၊ လေ့လာမှု ၂ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်သောသူများသည်မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောအစာကိုရှောင်ကြဉ်သောသင်တန်းသားများထက်နှေးနှေးလျှော့စျေးလျှော့ချကြောင်းပြသခဲ့သည်။ တွေ့ရှိချက်အရအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်လိင်ဆိုင်ရာဆုလာဘ်ဖြစ်ပြီးအခြားသဘာဝဆုကျေးဇူးများနှင့်ကွဲပြားခြားနားစွာလျှော့စျေးလျှော့ချခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ထို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုဆုလာဘ်၊ စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေခြင်းနှင့်စွဲခြင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများတွင်ထူးခြားသောလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအဖြစ်ဆက်ဆံရန်နှင့်၎င်းကိုတစ် ဦး ချင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကုသမှုများတွင်အညီအသုံးပြုရန်အရေးကြီးသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အလုပ်မဖြစ်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ငိုကြွေးနေသောကောင်ကလေးအထီးအတွက်ဘာစွဲ (2015) ဆုံးဖြတ် - မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်ကျဘာစွဲ (CA) ပြင်းထန်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှား၏ညွှန်းကိန်းများအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့သရုပ်ပြနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအားဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်, CA ရောဂါလက္ခဏာတွေအကြားဆက်ဆံရေးကမကထပြုခဲ့ကြောင်းပါပြီ။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလိင်တူဆက်ဆံသူယောက်ျားတစ်နမူနာ၌ဤဖျန်ဖြေခြင်းကိုစမ်းသပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ မေးခွန်း, CA, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလှုံ့ဆျောမှု, ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများနှင့်စစ်မှန်သောဘဝနှင့်အွန်လိုင်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုမှ sensitivity ကိုလက္ခဏာတွေအကဲဖြတ်။ ထိုမှတပါး, သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုအားပေးနှင့်ဗီဒီယိုတင်ဆက်မှုမီနှင့်အပြီးသူတို့ရဲ့လိင်စိတ်နိုးထညွှန်ပြ။ ရလဒ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ, နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများအားဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း, လိင်စိတ်နိုးထနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှား၏, CA လက္ခဏာတွေနှင့်ညွှန်းကိန်းများအကြားခိုင်မာတဲ့ဆက်စပ်မှုပြသခဲ့သည်။ , CA အော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အပတ်စဉ်ကျဘာအသုံးပြုမှုကိုအချိန်နှင့်ဆက်စပ်မခံခဲ့ရပါဘူး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအားဖြင့်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့် CA. အကြားဆက်ဆံရေးကမကထပြုခဲ့ ရလဒ်ယခင်လေ့လာမှုများအတွက်လိင်ကွဲယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းမှုအတွက်အစီရင်ခံသူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ကြပြီးကြောင့်ကျဘာကိုအသုံးပြုခြင်းမှအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောအားဖြည့်များ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမီးမောင်းထိုးပြရာ, CA ၏သီအိုရီယူဆချက်၏နောက်ခံဆန့်ကျင်ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ဖွဲ့စည်းသင်ယူဘို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာပုံမှန်ဘာအသုံးပြုသူများ (2016) ၏နမူနာထဲမှာဘာစွဲဆီသို့သဘောထားတွေကိုခန့်မှန်းပြီး - ဘာစွဲ၏အဖြေရှာတဲ့စံနှင့် ပတ်သက်. မျှသဘောတူညီမှုရှိပါသည်။ တချို့ကချဉ်းကပ်မှုဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုအရေးပါသောယန္တရားဖြစ်သောများအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှတူညီ postulate ။ ဤလေ့လာမှု၌, 86 လိင်ကွဲအထီးကျဘာစွဲအတွက်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အတူပြုပြင်ထားသောတူရိယာဆိုင်ရာလွှဲပြောင်း Task ကိုမှဟာ Standard Pavlovian ပြီးစီးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကြောင့်ကျဘာစွဲဆီသို့ဦးတည်ညစ်ညမ်းပုံနဲ့သဘောထားတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်များဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုများကတည်းဖြတ်, ဘာစွဲဆီသို့ဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုအပေါ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပြသခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဤတွေ့ရှိချက်ထောက်ပြ တစ်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍဆီသို့ဦးတည် ဘာစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သင်ယူမှုအသင်းအနေဖြင့် ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနှင့်ကျဘာစွဲအကြားတူညီဘို့နောက်ထပ်ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားပေး
လိင် Active ကိုတစ်ဦးချင်း (2016) ၏အလိုက်အတွက်လိင်-Related စကားမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုတို့အကြားဆက်ဆံရေး Exploring - ဤလေ့လာမှုမှတွေ့ရှိချက်များကိုပုံတူပွားသည် ဒီ 2014 ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကလေ့လာမှု ကြောင်းကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုမှ porn စွဲ၏အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ အဆိုပါလေ့လာမှုအသစ်မတူ: မဟုတ်ဘဲထိန်းချုပ်မှုမှ porn စွဲနှိုင်းယှဉ်ထက်, လေ့လာမှုအသစ် (အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုအကဲဖြတ်တစ်ဦးတာဝန်၏ရလဒ်များကိုမှတစ်ဦးလိင်စွဲမေးခွန်းလွှာအပေါ်ရမှတ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းအာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၏ရှင်းပြချက်) ။ အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်စဉ်အတွင်း သာ. ကြီးမြတ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက် (တိုးလာအာရုံ) နဲ့ဆက်နွယ်နေကြောင်း 1) အဆင့်မြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ရမှတ်: အဆိုပါလေ့လာမှုနှစ်ခုသော့ချက်ရလဒ်များကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤသည်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုလေ့လာမှုများနှင့်အတူ aligns ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲအပေါ်မြင့်မားသောသွင်းယူသူတွေထဲမှာ 2), ပိုနည်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှစ် related ခဲ့ကြသည် သာ. ကြီး အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု။ စာရေးသူများကဤရလဒ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာ“ အတင်းအကျပ်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်း” သည်သာမန်အားဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း (သို့) အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှု (desensitization) ၏အထွေထွေထုံခြင်းသို့ ဦး တည်ကြောင်းညွှန်ပြနိုင်သည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ နိဂုံးအပိုင်းမှကောက်နုတ်ချက် -“ဤအရလဒ်များအတွက်တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သမျှရှင်းပြချက်တစ်လိင် compulsive တစ်ဦးချင်းစီကိုပိုမို compulsive အပြုအမူများတွင်ပါဝင်နေသည်အဖြစ်တစ်ခုဆက်စပ် arousal template ကိုဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပိုပြီးအစွန်းရောက်အပြုအမူသဘောပေါက်ခံရဖို့ arousal ၏တူညီသောအဆင့်ကိုလိုအပ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းကိုပိုပြီး compulsive အပြုအမူများတွင်ပါဝင်နေသည်အတိုင်း, neuropathways ပိုပြီး '' ပုံမှန် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများကိုမှ desensitized ဖြစ်လာစေရန်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီဆန္ဒရှိသည့် arousal နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ပိုပြီး '' လွန်ကဲ '' လှုံ့ဆော်မှုမှလှန်သောနောက်ထပ်စောဒကတက်တာဖြစ်ပါတယ်။ "
အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်စိတ်ဓါတ်များအပြောင်းအလဲများကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း-ကြည့်ရှုရောဂါ (2016) ၏ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည် - ကောက်နှုတ်ချက်: လေ့လာမှု၏အဓိကရလာဒ်များမှာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဆိုင်ရာရောဂါ (IPD) နှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်းမွန်သော၊ နိုးကြား။ အေးဆေးတည်ငြိမ်ခြင်းနှင့်နေ့စဉ်ဘ ၀ ၌စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုရှာဖွေရန်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည်။ နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှောင်ရှားခြင်း။ ထို့အပြင် IPD နှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းမပြုမီနှင့်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သော၊ အင်တာနက် - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကြောင့် IPD နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရှာဖွေခြင်းလမ်းကြောင်းများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုအတွေ့အကြုံရှိအော်ဂဇင်၏ကျေနပ်မှုကိုအကဲဖြတ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များအနေဖြင့် IPD သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒပြည့်ဝမှုကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဆိုးရွားသည့်စိတ်ခံစားမှုများကိုရှောင်ရှားရန်သို့မဟုတ်ကိုင်တွယ်ရန်တွန်းအားပေးခြင်းအပြင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများစားသုံးမှုနောက်တွင်စိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲခြင်းသည် IPD နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟူသောယူဆချက်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟူသောယူဆချက်နှင့်ကိုက်ညီသည် (Cooper က et al ။ , 1999 နှင့် Laier နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, 2014).
ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: လက်တွေ့အပြုအမူများနှင့် neurocognitive variable တွေကို (2016) ကိုဖြတ်ပြီးအသင်း - ပြသနာများသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ (PSB) ရှိသူများသည်အာရုံကြော - သိမြင်မှုဆိုင်ရာချို့တဲ့မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များက ပို၍ ဆင်းရဲသည်ကိုပြသည် အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်ကို တစ်ဦးဖြစ်သော (hypofrontality) မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် occuring key ကိုဦးနှောက်အင်္ဂါရပ်။ အနည်းငယ်ကောက်နှုတ်ချက်: ဒီစရိုက်လက္ခဏာတွေကနေ, ကအထူးသဖြင့်သိမြင်လိုငွေပြမှုငှါ, PSB အတွက်ထင်ရှားပြဿနာတွေနဲ့ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ခံစားမှု dysregulation အဖြစ်နောက်ထပ်လက်တွေ့ features တွေ, ခြေရာကောက်ရန်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ် ... ။ ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့်နေရာသိမြင်မှုပြဿနာများကိုအမှန်တကယ် PSB ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များမှာလျှင်ဤမှတ်သားလောက်လက်တွေ့သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။
လိင် compulsive နှင့် Non-လိင် compulsive အမျိုးသားများ၏အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံခြင်းမပြုမီကာခေါ်ဆောင်သွားဗီဒီယို (2017) အကဲခတ်ပြီးနောက် - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပါ ၀ င်သည့်ယောက်ျားများတွင်ညစ်ညမ်းသောသက်ရောက်မှုခံရသည့်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းဖြစ်သော်လည်းကောင်းမွန်သောထိန်းချုပ်မှုများမဟုတ်ပါ။ စွဲလမ်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါအလုပ်အမှုဆောင်ညံ့ဖျင်းသောအမှုဆောင်အရာရှိသည်ပစ္စည်းဥစ္စာမမှန်ခြင်း (နှစ်မျိုးလုံးကိုပြသည်) ပြောင်းလဲ prefrontal ဆားကစ် နှင့် ာင်း) ။ ကောက်နှုတ်ချက်: ဤသည်တွေ့ရှိချက်လိင် compulsive သင်တန်းသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထိန်းချုပ်မှုများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွပြီးနောက်ပိုကောင်းသိမြင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖော်ပြသည်။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုလိင် compulsive ယောက်ျားပိုကောင်းအပြုအမူပြုပြင်မွမ်းမံမှုနိုင်သောအတွေ့အကြုံကနေဖြစ်နိုင်ချေသင်ယူမှုအကျိုးသက်ရောက်မှု၏အားသာချက်ယူမကျင့်သောစိတ်ကူးထောက်ခံပါတယ်။ ဤသည်ကိုလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏ activation အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသိမှတ်ခံစားမှုတစ်ခုတိုးပွားလာငွေပမာဏနှင့်အတူစတင်သည်ထားတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏သံသရာတွင်မည်သို့ဖြစ်ပျက်ဆင်တူသူတို့လိင်နှိုးဆွပေးခဲ့ကြသည်အခါလိင် compulsive အုပ်စုတစ်စု, တစ်ဦးသင်ယူမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုမရှိခြင်း, အဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်နိုင် အလွန်မကြာခဏအန္တရာယ်များအခြေအနေများမှထိတွေ့မှုနှငျ့ပတျသကျသော script များ, ပြီးတော့အော်ဂဇင်။
အမျိုးသားများအတွက်များထဲတွင်ဆိုက်ဘာဆိုးသွမ်းအတွက်တိုးမြှင့်ပါဝင်ပတ်သက်မှု (2017) မှဦးစီးဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသွေးဆောင် သာ. ကွီးမွတျမှ exposure - လေ့လာမှုနှစ်ခုတွင်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကြောင့်ရလဒ် ၁ - နောက်ကျသောလျှော့စျေးလျှော့ချခြင်း (ဖြည့်ဆည်းမှုကိုမနှောင့်နှေးနိုင်ခြင်း)၊ ၂) ဆိုက်ဘာမှားယွင်းမှုများတွင်ပါ ၀ င်ရန်ပိုမိုလိုလားခြင်း၊ အတူတူယူခြင်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်လှုံ့ဆော်မှုကိုတိုးမြှင့်စေပြီးအချို့သောအလုပ်အမှုဆောင်တာ ၀ န်များကိုလျှော့ချနိုင်သည် (ချုပ်တည်းခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်း၊ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကောက်နှုတ်ချက် - ဤတွေ့ရှိချက်များကဆိုက်ဘာပြစ်မှုကျူးလွန်မှုများတွင်အမျိုးသားများပါ ၀ င်မှုကိုလျှော့ချရန်မဟာဗျူဟာတစ်ခုအားထိုးထွင်းသိမြင်စေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်နှောင့်နှေးနေသောဆန္ဒပြည့်ဝမှုကိုမြှင့်တင်ခြင်းအားဖြင့်လျော့နည်းစေသည်။ လက်ရှိရလဒ်များအရဆိုက်ဘာအာကာသအတွင်းလိင်လှုံ့ဆော်မှုမြင့်မားမှုသည်ယခင်ထင်ထားသည့်အမျိုးသားများထက်လိင်မှုဆိုင်ရာကျူးလွန်သည့်အပြုအမူများနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်။
အင်တာနက် (ပြဿနာ) ကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ခန့်မှန်းလိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်း: လိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းဆီသို့စရိုက်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Motivation and Implicit ချဉ်းကပ်လိုတဲ့သဘောထားကို၏အခန်းက္ပ (2017) - ကောက်နှုတ်ချက်: ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းဆီသို့ရိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်သွယ်ဝိုက်ချဉ်းကပ်လိုတဲ့သဘောထားကိုပြဿနာ SEM အသုံးပြုမှုနှင့် SEM စောင့်ကြည့်နေခဲ့ရသည်နေ့စဉ်အချိန်ခန့်မှန်းနေကြသည်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။ တစ်ဦးအမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုတှငျကြှနျုပျတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းဆီသို့သွယ်ဝိုက်ချဉ်းကပ်လိုတဲ့သဘောထားကိုတိုင်းတာဘို့ချဉ်းကပ်-ရှောင်ရှား Task ကို (AAT) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ SEM စောင့်ကြည့်သုံးစွဲ SEM နှင့်နေ့စဉ်အချိန်ဆီသို့သွယ်ဝိုက်ချဉ်းကပ်မှုသဘောထားကိုအကြားတစ်ဦးကအပြုသဘောဆက်စပ်မှုအာရုံကိုသက်ရောက်မှုအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့စေခြင်းငှါ: မြင့်သွယ်ဝိုက်ချဉ်းကပ်မှုသဘောထားကို SEM ဆီသို့ဦးတည်ထားတဲ့အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပါသည်။ ဒီအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးကဘာသာရပ်ပိုပြီး SEM က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်သုံးစွဲအချိန်မြင့်မားတဲ့ပမာဏသာရှိရရှိလာတဲ့အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဆွဲဆောင်ခံရပေလိမ့်မည်။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါဆီသို့သဘောထားတွေ: ညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုဖို့အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်ကွာခြားချက်များ (2018) - ကောက်နှုတ်ချက်: စာရေးသူအတော်များများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းရောဂါ (IPD) ကိုစွဲလမ်းစေသောရောဂါဟုသတ်မှတ်ကြသည်။ ပစ္စည်းနှင့်ပစ္စည်းမဟုတ်သောရောဂါများကိုပြင်းထန်စွာလေ့လာခဲ့သည့်ယန္တရားတစ်ခုမှာစွဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များကိုပိုမိုအာရုံစိုက်စေသည်။ IPD ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၏အခန်းကဏ္ateကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးပါ ၀ င်သူ ၁၇၄ ဦး ကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သည်။ အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုကို Visual Probe Task ဖြင့်တိုင်းတာသည်။ ၎င်းတွင်ပါဝင်သူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်ကြားနေရုပ်ပုံများအရပေါ်လာသည့်မြားများကိုတုံ့ပြန်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအားဖြင့်သွေးဆောင်သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်နှိုးဆွညွှန်ပြခဲ့ကြရသည်။ ထို့အပြင် IPD နှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားများကိုတိုတောင်းသောအင်တာနက်လိင်စွဲမှုကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်တိုင်းတာသည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များသည်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့် cue-reactivity နှင့်တလိုတလားအညွှန်းကိန်းများကကမကထပြုထားသော IPD ၏လက္ခဏာပြင်းထန်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ရလာဒ်များသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောအဓိကအချက်များနှင့်ပတ်သက်သော I-PACE မော်ဒယ်၏သီအိုရီဆိုင်ရာယူဆချက်ကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။ ထို့အပြင် cue- ဓာတ်ပြုခြင်းနှင့် ၀ တ္ထု - အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်တွန်းအားများကိုလေ့လာခြင်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါဆီသို့စိတ်သဘောထားနှင့်အတူယောက်ျားအတွက်ရိုနှင့်ပြည်နယ် Impulse (Antons & Brand, 2018) - ကောက်နှုတ်ချက်: စွဲလမ်း၏ Dual-ဖြစ်စဉ်ကိုမော်ဒယ်များနှင့်အညီ, ရလဒ်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါအရာထကြွလွယ်သောနှင့်ရောင်ပြန်စနစ်များအကြားတစ်ဦးမညီမမျှ၏ညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်အပျက်သဘောအကျိုးဆက်များကြုံနေရဆိုသော်ငြားအင်တာနက်ကို-ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်၏ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။
Impulse နှင့်ဆက်စပ်ရှုထောင့်၏ရှုထောငျ့ (အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အပန်းဖြေခြင်းနှင့်စည်းကမ်းတအသုံးပြုမှုအကြားခွဲခြားStephanie et al။ , 2019) ကောက်နှုတ်ချက်: စည်းကမ်းတအသုံးပြုမှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီလျှော့နှောင့်နှေး, တဏှာ, အာရုံစူးစိုက်မှုကို Impulse များအတွက်အမြင့်ဆုံးရမှတ်ပြပြီး, အလုပ်မဖြစ်ဖြေရှင်းနှင့် functional ဖြစ်စေဖြေရှင်းခြင်းနှင့်အခြားသောကောင်းကျိုးတို့အတွက်လိုအပ်များအတွက်နိမ့်ဆုံးရမှတ်။ ရလဒ်တချို့ Impulse ၏ရှုထောငျ့နှင့်ထိုကဲ့သို့သောတဏှာနှင့်တစ်ဦးထက်ပိုအနုတ်လက္ခဏာသဘောထားကိုအဖြစ်ဆက်စပ်အချက်များကိုစည်းကမ်းတ IP ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်တိကျတဲ့ဖြစ်ကြောင်း။ ညွှန်ပြ ရလဒ်ကိုလည်းသီးခြားအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မမှန်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအပေါ်မော်ဒယ်များနှင့်အတူတသမတ်တည်းရှိပါတယ် .... တစ်ဦးကထပ်မံစိတ်ဝင်စားဖို့ရလဒ် session တစ်ခုနှုန်းနဲ့မိနစ် Post-hoc စမ်းသပ်မှုကြာချိန်များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား, အပန်းဖြေ-မကြာခဏအသုံးပြုသူများနှင့်စည်းကမ်းတအသုံးပြုသူများကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ, တစ်ပတ်ကိုကြိမ်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သညျ။ ဖြစ်ပါသည် ဤသည်ကိုစည်းကမ်းတ IP ကိုအသုံးပြုမှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအထူးသဖြင့်တစ်ဦး session တစ်ခုအတွင်းမှာ IP ကိုစောင့်ကြည့်ရပ်တန့်ဖို့အခက်အခဲရှိသည်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အတွက်သည်းခံစိတ်တစ်ပုံစံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါလိမ့်မယ်သောတပ်မက်လိုချင်သောဆုလာဘ်, အောင်မြင်ရန်ကြာကြာအချိန်မလိုအပ်ကြောင်းညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်။
ညစ်ညမ်းကိုအသုံးပြုဖို့သူအလိင်ကွဲအထီးကောလိပ်ကျောင်းသားများကိုအတွက်ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှု (2019) - ကောက်နှုတ်ချက်: ယေဘုယျအားဖြင့်တွေ့ရှိချက်များကစွဲလမ်းစေသည့်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ချဉ်းကပ်မှုသည်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းထက်ပိုမိုလျင်မြန်သောသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ထားသည့်တုန့်ပြန်မှုဖြစ်နိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများတွင်အခြားသိမြင်မှုဘက်လိုက်မှုများ၏ဆက်စပ်မှုကိုရှင်းပြနိုင်သည်။ ထို့အပြင် BPS ၏စုစုပေါင်းရမှတ်များမှာအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ဘက်လိုက်မှုရမှတ်များ၊ ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုပြင်းထန်မှု၊ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအတွက်ချဉ်းကပ်မှုဒီဂရီပိုမိုပြင်းထန်လာသည်ကိုဖော်ပြသည်။Grant et al ။ , 2010) ။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို (အထူးသဖြင့်ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်း) (အရက်သုံးမမှန်အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းတစ်ခုချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုဆင်တူ, ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုထက်ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုဖို့ပိုမြန်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်Field et al ။ , 2008; Wiers et al ။ , 2011), ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း (Cousijn et al ။ , 2011; Field et al ။ , 2006), နှင့်ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲပုံမမှန် (Bradley et al ။ , 2004) ။ သိမြင်မှုအင်္ဂါရပ်များနှင့်နှစ်ဦးစလုံးပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းနှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုပါဝင်ပတ်သက် neurobiological ယန္တရားများအကြားတစ်ဦးထပ်တူ (ကြိုတင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းသောဖွယ်ရှိပုံရသည်Kowalewska et al ။ , 2018; Stark et al ။ , 2018).